You are at:Home»MoeMaKa Feeds
Photos from Ministry of Home Affairs, Myanmar's post
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် မှုခင်းပညာပေးပြခန်းယာဉ်ဖြင့်မှုခင်း ကျဆင်းရေး အသိပညာပေး လှည့်လည် ဟောပြောပြသ
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၏ စီစဉ်ညွှန်ကြားချက်အရ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးများသည် မှုခင်းပညာပေးပြခန်းယာဉ်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ ပြည်သူများအား မှုခင်းကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဗဟုသုတတိုးပွားစေရေး အတွက် အသိပညာပေးလှည့်လည် ဟောပြောပြသလျက်ရှိရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး သိန်းနိုင် ဦးစီးသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်ရပ်ကွက်ရှိ အမှတ်(၅)အခြေခံ ပညာအထက်တန်းကျောင်း၌လည်းကောင်း၊ ကန်ကောက်ရပ်ကွက်၊ ၂၆ လမ်း× ၅၈ လမ်းထောင့်၌ လည်းကောင်း ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/သူများ၊ ပြည်သူများ၊ စုစုပေါင်း(၂၁၇၃)ဦးတို့အား မှုခင်းကြိုတင်ကာကွယ် တားဆီးရေး၊ လူကုန်ကူးမှုပပျောက်ရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းလိုက်နာရေး အသိပညာပေး ဟောပြော ပြသခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသူများအား မှုခင်းအသိပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တွင် မှုခင်းကျဆင်းရေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
ယမန်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအချိန်ထိ နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ သစ်ဆိမ့်ပင်ကျေးရွာရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ မှုခင်းကျဆင်းရေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး ကြည်ဝင်း ဦးစီးသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မှုခင်း ကျဆင်းရေး၊ လူကုန်ကူးမှုအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ်ရေး၊ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု မဖြစ်ပွားစေရေးနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရေးတို့အား အသိပညာပေး ဟောပြောခဲ့ပြီး ဟောပြောပွဲသို့ ကျေးရွာနေပြည်သူ(၁၀၀)ဦး တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင် မှုခင်းကျဆင်းရေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
ယမန်နေ့ နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်ထိ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ နမ်းဟူးတောင်းကျေးရွာရှိ ဘုံခန်းမ၌ မှုခင်းကျဆင်းရေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး သန်းထွန်းဝင်း ဦးစီးသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မှုခင်းကျဆင်းရေး၊ လူကုန်ကူးမှုအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု မဖြစ်ပွားစေရေးနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး တို့အား အသိပညာပေး ဟောပြောခဲ့ပြီး ဟောပြောပွဲသို့ ကျေးရွာနေပြည်သူ(၁၆၅)ဦးတို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မိုးမိတ်မြို့နယ်တွင် မှုခင်းကျဆင်းရေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
ယမန်နေ့ နံနက် ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ်မှ ၈ နာရီ ၅၀ မိနစ်အချိန်ထိ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုးမိတ်မြို့၊ မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်ရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ မှုခင်းကျဆင်းရေး အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး ဇာနည်လတ် ဦးစီးသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မှုခင်းကျဆင်းရေး၊ လူကုန်ကူးမှုအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု မဖြစ်ပွားစေရေးနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးတို့အား အသိပညာပေး ဟောပြောခဲ့ပြီး ဟောပြောပွဲသို့ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/သူများ၊ စုစုပေါင်း(၁၂၀)ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဝါးခယ်မမြို့နယ်တွင် မှုခင်းကျဆင်းရေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
ယမန်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအချိန်ထိ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝါးခယ်မ မြို့နယ်၊ ကျုံမငေးမြို့၊ သီရိဟေမာရပ်ကွက်ရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ မှုခင်းကျဆင်းရေး အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး ခင်နိုင် ဦးစီးသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မှုခင်းကျဆင်းရေး၊ လူကုန်ကူးမှုအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု မဖြစ်ပွားစေရေးနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးတို့အား အသိပညာပေး ဟောပြောခဲ့ပြီး ဟောပြောပွဲသို့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးနိုင်လင်း၊ ဒုမြို့နယ်ဥပဒေအရာရှိ ဦးမျိုးကိုကိုဟိန်း၊ ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီး ဦးဇော်မျိုးထွန်းနှင့် ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/သူများ၊ စုစုပေါင်း(၁၂၅၀)ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးတှငျ မှုခငျးပညာပေးပွခနျးယာဉျဖွငျ့ မှုခငျးကဆြငျးရေး အသိပညာပေး လှညျ့လညျ ဟောပွောပွသ
နပွေညျတျော၊ ဇနျနဝါရီ ၂၀
မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့ဌာနခြုပျ၏ စီစဉျညှနျကွားခကျြအရ နပွေညျတျော၊ တိုငျးဒသေကွီး/ ပွညျနယျရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးမြားသညျ မှုခငျးပညာပေးပွခနျးယာဉျမြားဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံတဈဝနျးလုံးရှိ ပွညျသူမြားအား မှုခငျးကွိုတငျကာကှယျတားဆီးရေးလုပျငနျးမြားတှငျ ဗဟုသုတတိုးပှားစရေေး အတှကျ အသိပညာပေးလှညျ့လညျ ဟောပွောပွသလကျြရှိရာ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးရဲတပျဖှဲ့၊ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူး သိနျးနိုငျ ဦးစီးသညျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြားက ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၈ ရကျနတှေ့ငျ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ၊ ပွညျကွီးမကျြရှငျရပျကှကျရှိ အမှတျ(၅)အခွခေံ ပညာအထကျတနျးကြောငျး၌လညျးကောငျး၊ ကနျကောကျရပျကှကျ၊ ၂၆ လမျး× ၅၈ လမျးထောငျ့၌ လညျးကောငျး ဆရာ/ဆရာမမြား၊ ကြောငျးသား/သူမြား၊ ပွညျသူမြား၊ စုစုပေါငျး(၂၁၇၃)ဦးတို့အား မှုခငျးကွိုတငျကာကှယျ တားဆီးရေး၊ လူကုနျကူးမှုပပြောကျရေး၊ မူးယဈဆေးဝါးအန်တရာယျ တားဆီးကာကှယျရေးနှငျ့ ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျးလိုကျနာရေး အသိပညာပေး ဟောပွော ပွသခဲ့ပွီး တကျရောကျလာသူမြားအား မှုခငျးအသိပညာပေး လကျကမျးစာစောငျမြား ဖွနျ့ဝပေေးခဲ့ ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ပဉျြးမနားမွို့နယျတှငျ မှုခငျးကဆြငျးရေး အသိပညာပေးဟောပွောပှဲ ကငျြးပပွုလုပျ
ယမနျနေ့ နံနကျ ၁၀ နာရီမှ မှနျးတညျ့ ၁၂ နာရီအခြိနျထိ နပွေညျတျော၊ ပဉျြးမနားမွို့နယျ၊ သဈဆိမျ့ပငျကြေးရှာရှိ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျး၌ မှုခငျးကဆြငျးရေး အသိပညာပေးဟောပွောပှဲ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ရာ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူး ကွညျဝငျး ဦးစီးသညျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြားက မှုခငျး ကဆြငျးရေး၊ လူကုနျကူးမှုအန်တရာယျ တားဆီးကာကှယျရေး၊ မူးယဈဆေးဝါးအန်တရာယျ တားဆီး ကာကှယျရေး၊ သကျငယျမုဒိမျးမှု မဖွဈပှားစရေေးနှငျ့ ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျး လိုကျနာ ဆောငျရှကျရေးတို့အား အသိပညာပေး ဟောပွောခဲ့ပွီး ဟောပွောပှဲသို့ ကြေးရှာနပွေညျသူ(၁၀၀)ဦး တို့ တကျရောကျခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ကြောကျမဲမွို့နယျတှငျ မှုခငျးကဆြငျးရေး အသိပညာပေးဟောပွောပှဲ ကငျြးပပွုလုပျ
ယမနျနေ့ နံနကျ ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနဈအခြိနျထိ ရှမျးပွညျနယျ၊ ကြောကျမဲမွို့နယျ၊ နမျးဟူးတောငျးကြေးရှာရှိ ဘုံခနျးမ၌ မှုခငျးကဆြငျးရေး အသိပညာပေးဟောပွောပှဲ ကငျြးပ ပွုလုပျခဲ့ရာ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူး သနျးထှနျးဝငျး ဦးစီးသညျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြားက မှုခငျးကဆြငျးရေး၊ လူကုနျကူးမှုအန်တရာယျ တားဆီးကာကှယျရေး၊ မူးယဈဆေးဝါးအန်တရာယျ တားဆီးကာကှယျရေး၊ သကျငယျမုဒိမျးမှု မဖွဈပှားစရေေးနှငျ့ ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျး လိုကျနာဆောငျရှကျရေး တို့အား အသိပညာပေး ဟောပွောခဲ့ပွီး ဟောပွောပှဲသို့ ကြေးရှာနပွေညျသူ(၁၆၅)ဦးတို့ တကျရောကျ ခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
မိုးမိတျမွို့နယျတှငျ မှုခငျးကဆြငျးရေး အသိပညာပေးဟောပွောပှဲ ကငျြးပပွုလုပျ
ယမနျနေ့ နံနကျ ၇ နာရီ ၃၀ မိနဈမှ ၈ နာရီ ၅၀ မိနဈအခြိနျထိ ရှမျးပွညျနယျ၊ မိုးမိတျမွို့၊ မွောကျပိုငျးရပျကှကျရှိ အခွခေံပညာအထကျတနျးကြောငျး၌ မှုခငျးကဆြငျးရေး အသိပညာပေး ဟောပွောပှဲ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ရာ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူး ဇာနညျလတျ ဦးစီးသညျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြားက မှုခငျးကဆြငျးရေး၊ လူကုနျကူးမှုအန်တရာယျ တားဆီးကာကှယျရေး၊ မူးယဈဆေးဝါးအန်တရာယျ တားဆီးကာကှယျရေး၊ သကျငယျမုဒိမျးမှု မဖွဈပှားစရေေးနှငျ့ ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျး လိုကျနာဆောငျရှကျရေးတို့အား အသိပညာပေး ဟောပွောခဲ့ပွီး ဟောပွောပှဲသို့ ဆရာ/ဆရာမမြား၊ ကြောငျးသား/သူမြား၊ စုစုပေါငျး(၁၂၀)ဦးတို့ တကျရောကျခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ဝါးခယျမမွို့နယျတှငျ မှုခငျးကဆြငျးရေး အသိပညာပေးဟောပွောပှဲ ကငျြးပပွုလုပျ
ယမနျနေ့ နံနကျ ၁၀ နာရီမှ မှနျးတညျ့ ၁၂ နာရီအခြိနျထိ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ ဝါးခယျမ မွို့နယျ၊ ကြုံမငေးမွို့၊ သီရိဟမောရပျကှကျရှိ အခွခေံပညာအထကျတနျးကြောငျး၌ မှုခငျးကဆြငျးရေး အသိပညာပေး ဟောပွောပှဲ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ရာ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူး ခငျနိုငျ ဦးစီးသညျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြားက မှုခငျးကဆြငျးရေး၊ လူကုနျကူးမှုအန်တရာယျ တားဆီးကာကှယျရေး၊ မူးယဈဆေးဝါး အန်တရာယျ တားဆီးကာကှယျရေး၊ သကျငယျမုဒိမျးမှု မဖွဈပှားစရေေးနှငျ့ ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျး လိုကျနာဆောငျရှကျရေးတို့အား အသိပညာပေး ဟောပွောခဲ့ပွီး ဟောပွောပှဲသို့ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးနိုငျလငျး၊ ဒုမွို့နယျဥပဒအေရာရှိ ဦးမြိုးကိုကိုဟိနျး၊ ကြောငျးအုပျ ဆရာကွီး ဦးဇျောမြိုးထှနျးနှငျ့ ဆရာ/ဆရာမမြား၊ ကြောငျးသား/သူမြား၊ စုစုပေါငျး(၁၂၅၀)ဦးတို့ တကျရောကျခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
www.myanmarmoha.org ... See more
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ဖြန့်ဝေသော မီးဘေးလုံခြုံရေးပညာပေးစာစောင်
ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာန၊ မီးသတျဦးစီးဌာနမှ ဖွနျ့ဝသေော မီးဘေးလုံခွုံရေးပညာပေးစာစောငျ
မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိသည့် သတင်းများ (၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့)
မိုးညှင်းမြို့နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ
ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ ၁၆၃၀ အချိန် မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၃)မိုးညှင်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မော်ဟန်ကျေးရွာ၊ မော်ဟန်-နမ္မချီး ကားလမ်း၊ မော်ဟန်သင်္ချိုင်းကုန်း အနီး၌ ဂျူးလေးအောင် မောင်းနှင်လာ သည့်မော်တော်ဆိုင်ကယ် ရောက်ရှိလာ၍ရှာဖွေရာ ဂျူးလေးအောင်၏ အင်္ကျီအိတ်ကပ်အတွင်းမှ ဘိန်းဖြူ ၁၆ ဂရမ် နှင့် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၇၉၅ ပြားတို့ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သဖြင့် ဂျူးလေးအောင်(၂၆)နှစ်အား မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေအရ အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အင်းတော်မြို့နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ
ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ ၁၂၀၀ အချိန် မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၆) ကသာမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် အင်းတော်မြို့နယ်၊ ကမ်းနီကျေးရွာအနီး ရထားသံလမ်းကူးလမ်း၌ ကျော်လွင် မောင်းနှင်ပြီး ခိုင်ဇော်ဦး လိုက်ပါသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရောက်ရှိလာ၍ရှာဖွေရာ ခိုင်ဇော်ဦး၏ လွယ်အိတ်အတွင်းမှ ဘိန်းဖြူဆပ်ပြာခွက် ၁၈ ခွက် (ဘိန်းဖြူ အလေးချိန် ၁၉၈ ဂရမ် )နှင့် ကျော်လွင်ထံမှ ဘိန်းဖြူ သုည ဒသမ ၀၅ ဂရမ်တို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သဖြင့် ကျော်လွင်(၄၇)နှစ်နှင့် ခိုင်ဇော်ဦး (၂၆)နှစ်တို့အား မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါး များဆိုင်ရာဥပဒေအရ အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကျွန်းစုမြို့နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ
ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ ၀၄၄၅ အချိန် ပုလဲမင်းစစ်ဆင်ရေးအရ မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၃၅)မြိတ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ စခန်းသစ်ကျေးရွာ၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်နေ လှစိုး၏နေအိမ်ကိုရှာဖွေရာ အိပ်ခန်းရှိကော်ပုံးအတွင်းမှ ဘိန်းစာမှုန့် ၂ ဒသမ ၁ ကီလို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး ကွင်းဆက်အရ ၀၅၀၅ အချိန် စခန်းသစ်ကျေးရွာ၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်နေ အောင်မင်းခိုင်အား ၎င်း၏နေအိမ်တွင် ရှာဖွေဖမ်းဆီး၍လည်းကောင်း၊ အလားတူ ၀၅၄၅ အချိန် စခန်းသစ်ကျေးရွာ၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ သာကေတ(၄)လမ်းနေ ကျော်သူရဝင်း၏နေအိမ်ကိုရှာဖွေရာ ကျော်သူရဝင်း နှင့် တေဇ တို့ကိုအတူတွေ့ရှိရပြီး အိပ်ခန်းအတွင်းမှ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၆,၀၉၅ ပြား၊ လက်ကိုင်ဖုန်း နှစ်လုံးနှင့် ငွေကျပ် ၆၈ ဒသမ ၈ သိန်း တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ထို့အတူ ၀၇၀၀ အချိန် စခန်းသစ် ကျေးရွာ၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်နေ မောင်မျိုး (ခ)ကျော်မျိုးလွင်၏နေအိမ်ကိုရှာဖွေရာ မီးဖိုခန်းအတွင်းမှ ဘိန်းစာမှုန့် ၁၄ ကီလိုကိုလည်းကောင်း၊ ဆက်လက်၍ ၀၇၃၀ အချိန် စခန်းသစ်ကျေးရွာ၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်နေ ဦးကျောက်ပုံ(ခ)ကိုနိုင်အေး၏နေအိမ်ကိုရှာဖွေရာ နေအိမ်မှစိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၄၇ ပြားနှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံး တိုကိုလည်းကောင်း အသီးသီးသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သဖြင့် လှစိုး(၄၆)နှစ်၊ အောင်မင်းခိုင် (၃၆)နှစ်၊ကျော်သူရဝင်း(ခ)အိုတုတ် (၃၅)နှစ်၊တေဇ (၂၄)နှစ် ၊မောင်မျိုး (ခ)ကျော်မျိုးလွင်(၄၁)နှစ် နှင့် ဦးကျောက်ပုံ(ခ)ကိုနိုင်အေး (၄၁)နှစ်တို့အား မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ ဆိုင်ရာဥပဒေအရ အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွင် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိ
ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ ၀၃၃၀ အချိန် မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၁၇)မန္တလေး(မြောက်ပိုင်း)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ၁၆ မိုင်ကျောက်ချောစစ်ဆေးရေး စခန်းတွင် ခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ် ကိုရှာဖွေရာ ခရီးသည် စိုင်းဇေယျာအောင်၏လွယ်အိတ်အတွင်းမှ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၉၉၀ ပြား နှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သဖြင့် စိုင်းဇေယျာအောင်(၃၈)နှစ်အား မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်း လဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မိုးမိတ်မြို့နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ
ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ ၁၅၀၀ အချိန် မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၂၄)လားရှိုးမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် မိုးမိတ်မြို့နယ်၊ တောင်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တဲကြီးကုန်းကျေးရွာနေ ဝင်းမောင် ၏နေအိမ်ကို ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ ဝင်းမောင်ထံမှ ဘိန်းဖြူဆပ်ပြာခွက် ၁၁ ခွက် (ဘိန်းဖြူ အလေးချိန် ၁၁၀ ဂရမ်)နှင့် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၃၅၄ ပြားတို့ကိုသိမ်း ဆည်းရမိခဲ့သဖြင့် ဝင်းမောင်(၅၅)နှစ်အား မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်း လဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေအရ အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မူးယဈဆေးဝါးမြား ဖမျးဆီးရမိသညျ့ သတငျးမြား (၂၀၁၈ခုနှဈ၊ဇနျနဝါရီလ ၂၀ ရကျနေ့)
မိုးညှငျးမွို့နယျတှငျ မူးယဈဆေးဝါးမြား ဖမျးဆီးရမိ
ဇနျနဝါရီလ ၁၉ ရကျနေ့ ၁၆၃၀ အခြိနျ မူးယဈတပျဖှဲ့စု(၃)မိုးညှငျးမှတပျဖှဲ့ဝငျမြားပါဝငျသော ပူးပေါငျးအဖှဲ့သညျ မိုးညှငျးမွို့နယျ၊ မျောဟနျကြေးရှာ၊ မျောဟနျ-နမ်မခြီး ကားလမျး၊ မျောဟနျသင်ျခြိုငျးကုနျး အနီး၌ ဂြူးလေးအောငျ မောငျးနှငျလာသညျ့မျောတျောဆိုငျကယျ ရောကျရှိလာ၍ရှာဖှရော ဂြူးလေးအောငျ၏ အင်ျကြီအိတျကပျအတှငျးမှ ဘိနျးဖွူ ၁၆ ဂရမျ နှငျ့ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ၇၉၅ ပွားတို့ကို သိမျးဆညျးရမိခဲ့သဖွငျ့ ဂြူးလေးအောငျ(၂၆)နှဈအား မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့စိတျကိုပွောငျးလဲစသေော ဆေးဝါးမြားဆိုငျရာဥပဒအေရ အရေးယူထားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
အငျးတျောမွို့နယျတှငျ မူးယဈဆေးဝါးမြား ဖမျးဆီးရမိ
ဇနျနဝါရီလ ၁၉ ရကျနေ့ ၁၂၀၀ အခြိနျ မူးယဈတပျဖှဲ့စု(၆) ကသာမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား ပါဝငျသော ပူးပေါငျးအဖှဲ့သညျ အငျးတျောမွို့နယျ၊ ကမျးနီကြေးရှာအနီး ရထားသံလမျးကူးလမျး၌ ကြျောလှငျ မောငျးနှငျပွီး ခိုငျဇျောဦး လိုကျပါသညျ့ မျောတျောဆိုငျကယျရောကျရှိလာ၍ရှာဖှရော ခိုငျဇျောဦး၏ လှယျအိတျအတှငျးမှ ဘိနျးဖွူဆပျပွာခှကျ ၁၈ ခှကျ (ဘိနျးဖွူ အလေးခြိနျ ၁၉၈ ဂရမျ )နှငျ့ ကြျောလှငျထံမှ ဘိနျးဖွူ သုည ဒသမ ၀၅ ဂရမျတို့ကိုသိမျးဆညျးရမိခဲ့သဖွငျ့ ကြျောလှငျ(၄၇)နှဈနှငျ့ ခိုငျဇျောဦး (၂၆)နှဈတို့အား မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့စိတျကိုပွောငျးလဲစသေောဆေးဝါးမြားဆိုငျရာဥပဒအေရ အရေးယူထားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ကြှနျးစုမွို့နယျတှငျ မူးယဈဆေးဝါးမြား ဖမျးဆီးရမိ
ဇနျနဝါရီလ ၁၉ ရကျနေ့ ၀၄၄၅ အခြိနျ ပုလဲမငျးစဈဆငျရေးအရ မူးယဈတပျဖှဲ့စု(၃၅)မွိတျမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြားပါဝငျသော ပူးပေါငျးအဖှဲ့သညျ ကြှနျးစုမွို့နယျ၊ စခနျးသဈကြေးရှာ၊ အမှတျ(၁)ရပျကှကျနေ လှစိုး၏နအေိမျကိုရှာဖှရော အိပျခနျးရှိကျောပုံးအတှငျးမှ ဘိနျးစာမှုနျ့ ၂ ဒသမ ၁ ကီလို သိမျးဆညျးရမိခဲ့ပွီး ကှငျးဆကျအရ ၀၅၀၅ အခြိနျ စခနျးသဈကြေးရှာ၊ အမှတျ(၂)ရပျကှကျနေ အောငျမငျးခိုငျအား ၎င်းငျး၏နအေိမျတှငျ ရှာဖှဖေမျးဆီး၍လညျးကောငျး၊ အလားတူ ၀၅၄၅ အခြိနျ စခနျးသဈကြေးရှာ၊ အမှတျ(၄)ရပျကှကျ၊ သာကတေ(၄)လမျးနေ ကြျောသူရဝငျး၏နအေိမျကိုရှာဖှရော ကြျောသူရဝငျး နှငျ့ တဇေ တို့ကိုအတူတှရှေိ့ရပွီး အိပျခနျးအတှငျးမှ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ၆,၀၉၅ ပွား၊ လကျကိုငျဖုနျး နှဈလုံးနှငျ့ ငှကေပျြ ၆၈ ဒသမ ၈ သိနျး တို့ကိုလညျးကောငျး၊ ထို့အတူ ၀၇၀၀ အခြိနျ စခနျးသဈ ကြေးရှာ၊ အမှတျ(၄)ရပျကှကျနေ မောငျမြိုး (ခ)ကြျောမြိုးလှငျ၏နအေိမျကိုရှာဖှရော မီးဖိုခနျးအတှငျးမှ ဘိနျးစာမှုနျ့ ၁၄ ကီလိုကိုလညျးကောငျး၊ ဆကျလကျ၍ ၀၇၃၀ အခြိနျ စခနျးသဈကြေးရှာ၊ အမှတျ(၂) ရပျကှကျနေ ဦးကြောကျပုံ(ခ)ကိုနိုငျအေး၏နအေိမျကိုရှာဖှရော နအေိမျမှစိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ၄၇ ပွားနှငျ့ လကျကိုငျဖုနျးတဈလုံး တိုကိုလညျးကောငျး အသီးသီးသိမျးဆညျးရမိခဲ့သဖွငျ့ လှစိုး(၄၆)နှဈ၊ အောငျမငျးခိုငျ (၃၆)နှဈ၊ကြျောသူရဝငျး(ခ)အိုတုတျ(၃၅)နှဈ၊တဇေ(၂၄)နှဈ၊မောငျမြိုး(ခ)ကြျောမြိုးလှငျ(၄၁)နှဈ နှငျ့ ဦးကြောကျပုံ(ခ)ကိုနိုငျအေး(၄၁)နှဈတို့အား မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့စိတျကိုပွောငျးလဲစသေောဆေးဝါးမြား ဆိုငျရာဥပဒအေရ အရေးယူထားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ပုသိမျကွီးမွို့နယျတှငျ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွားမြား ဖမျးဆီးရမိ
ဇနျနဝါရီလ ၁၉ ရကျနေ့ ၀၃၃၀ အခြိနျ မူးယဈတပျဖှဲ့စု(၁၇)မန်တလေး(မွောကျပိုငျး)မှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား ပါဝငျသော ပူးပေါငျးအဖှဲ့သညျ ပုသိမျကွီးမွို့နယျ၊ ၁၆ မိုငျကြောကျခြောစဈဆေးရေးစခနျးတှငျ ခရီးသညျတငျမျောတျောယာဉျကိုရှာဖှရော ခရီးသညျ စိုငျးဇယြောအောငျ၏လှယျအိတျအတှငျးမှ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ၉၉၀ ပွား နှငျ့ လကျကိုငျဖုနျးတဈလုံးတို့ကို သိမျးဆညျးရမိခဲ့သဖွငျ့ စိုငျးဇယြောအောငျ(၃၈)နှဈအား မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ စိတျကိုပွောငျးလဲစသေောဆေးဝါးမြားဆိုငျရာ ဥပဒအေရ အရေးယူထားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
မိုးမိတျမွို့နယျတှငျ မူးယဈဆေးဝါးမြား ဖမျးဆီးရမိ
ဇနျနဝါရီလ ၁၈ ရကျနေ့ ၁၅၀၀ အခြိနျ မူးယဈတပျဖှဲ့စု(၂၄)လားရှိုးမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြားပါဝငျသော ပူးပေါငျးအဖှဲ့သညျ မိုးမိတျမွို့နယျ၊ တောငျကိုငျးကြေးရှာအုပျစု၊ တဲကွီးကုနျးကြေးရှာနေ ဝငျးမောငျ ၏နအေိမျကိုဝငျရောကျရှာဖှရော ဝငျးမောငျထံမှ ဘိနျးဖွူဆပျပွာခှကျ ၁၁ ခှကျ (ဘိနျးဖွူ အလေးခြိနျ ၁၁၀ ဂရမျ)နှငျ့ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ၃၅၄ ပွားတို့ကိုသိမျးဆညျးရမိခဲ့သဖွငျ့ ဝငျးမောငျ(၅၅)နှဈအား မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ စိတျကိုပွောငျးလဲစသေောဆေးဝါးမြားဆိုငျရာဥပဒအေရ အရေးယူထားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ ၂၀၄၀ အချိန် အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ကြို့ကုန်း အရှေ့ရပ်ကွက်၊အင်းစိန်လမ်း စိုက်ပျိုးရေးဝန်း ရှေ့၌ BB-xxxx ကိုရိုလာဗင် ငှားယာဉ်မှာ ရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီး ဦးထွန်းထွန်းလင်း(၄၂)နှစ်သည် ယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်း၍ ထွက်ပြေးလာစဉ် လဲကျသွားခဲ့ပါကြောင်း၊ ၎င်းအပြင်ယာဉ်ပေါ်မှ အမျိုးသား ၁ ဦး(စိစစ်ဆဲ)မှာ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ၃ ရပ်ကွက်၊ အေးရိပ်ငြိမ်လမ်းအတွင်းသို့ ထွက်ပြေးသွားပြီး အရာဝတ္တု ၁ ခုလွှင့်ပစ်ခဲ့၍ရှာဖွေရာ အေးရိပ်ငြိမ်လမ်းဘေး ရေမြောင်းအတွင်းမှ အရိုးအသွား ၉ လက်မ ခန့်ရှိဓား ၁ ချောင်းအား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါကြောင်း၊ ဦးထွန်းထွန်းလင်း တွင် ဝဲရင်အုံ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ ၃ ချက်၊ ကျောကုန်းထိုးသွင်းဒဏ်ရာ ၂ ချက်၊ ယာနံဘေး ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာ ၂ ချက်၊ ဦးခေါင်းချိုစောင်း ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ ၁ ချက်တို့ရရှိပြီး အင်းစိန် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကုသနေစဉ် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ၀၂၀၅ အချိန် အမည်(စိစစ်ဆဲ) အမျိုးသားအား အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်း(ပ)၁၄၁/၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ (လူသတ်မှု)ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး တရားခံဖမ်းဆီးရမိရေး စုံစမ်းခဲ့ရာ BB-xxxx ကိုရိုလာဗင် အငှားယာဉ်အတွင်းမှ ဂျပန်ဖိနပ်အဖြူရောင် ၁ ရံ၊ ကတ္ထီပါဖိနပ်နက်ပြာရောင် ၁ ရံနှင့် Bosch အမျိုးအစားနာရီ တစ်လုံး တို့တွေ့ရှိ၍ သေဆုံးသူ ဦးထွန်းထွန်းလင်း၏ ဇနီး ဒေါ်နိုင်နိုင်လွင်(၄၁)နှစ် အား ပြသခဲ့ရာ Bosch နာရီနှင့် ကတ္ထီပါဖိနပ်တို့မှာ ဦးထွန်းထွန်းလင်း၏ ပစ္စည်းများမဟုတ်ကြောင်း သိရှိရပြီး စစ်ဆေးချက်များအရ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက်တွင် ကိုကိုနိုင်(ခ)ကိုနိုင်(၃၃)နှစ်သည် ရေဥက္ကံကျေးရွာ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိအိမ်သို့ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဘောင်းဘီတို့တွင် ရွံများ ပေကျံကာ ဖိနပ်မပါဘဲ အငှားယာဉ်ဖြင့်ပြန်လာကြောင်း၊ ယာဉ်စီးခအား နေအိမ် မှတောင်းပေး ရကြောင်း၊ ၎င်းသည် Bosch အမျိုးအစားနာရီကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပြီး အခင်းဖြစ်ပြီး နောက် ၎င်းနာရီအား ဝတ်ဆင် ထားခြင်းမရှိကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့သဖြင့် ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ ၂၃၀၅ အချိန် ကိုကိုနိုင်(ခ)ကိုနိုင်အား မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (၁)ရပ်ကွက် ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ ဝန်း ယင်းမာလမ်းပေါ်၌ ဖမ်းဆီးရမိ၍ စစ်မေးရာ ၎င်းသည် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ ၂၀၀၀ အချိန် သူငယ်ချင်း မှ xxxx KTV သို့လာရန် ဖုန်းဆက်ခေါ်သဖြင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ် Denko ဆီဆိုင်ရှေ့မှ အငှားယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာလာစဉ် သမိုင်း လမ်းဆုံမီးပွိုင့်အရောက်တွင် ယာဉ်မောင်းမှ "ဘယ်တွေမောင်း ခိုင်းနေတာလဲ လိုက်မပို့ နိုင်တော့ဘူး၊ မင်းဆင်းတော့ ကားခပေးဟု တောင်းရာ ပိုက်ဆံမပါကြောင်း၊ xxxx KTV ရောက်မှ သူငယ်ချင်းထံမှတောင်း၍ ပေးမည်"ဟု ပြန်ပြောရာမှ အပြန် အလှန် စကားများ ဆဲဆိုပြီး ယာဉ်နောက်ခန်းအတွင်း၌ လုံးထွေးသတ်ပုတ် စဉ် ကိုကိုနိုင် (ခ)ကိုနိုင်မှ အသင့်ပါလာသော ဓားဖြင့် ယာဉ်မောင်းအား ထိုးခဲ့ပြီး ယာဉ်ပေါ်ရှိ ယာဉ်မောင်း၏ Sansung ဖုန်းအားယူ၍ ထွက်ပြေး ခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆိုသဖြင့် ဥပဒေနှင့် အညီ တရားစွဲ တင်ပို့ရန် စီစဉ်ထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၂၀၁၈ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၄ ရကျနေ့ ၂၀၄၀ အခြိနျ အငျးစိနျမွို့နယျ၊ ကွို့ကုနျး အရှရေ့ပျကှကျ၊အငျးစိနျလမျး စိုကျပြိုးရေးဝနျး ရှေ့၌ BB-xxxx ကိုရိုလာဗငျ ငှားယာဉျမှာ ရပျတနျ့သှားခဲ့ပွီး ဦးထှနျးထှနျးလငျး(၄၂)နှဈသညျ ယာဉျပျေါမှ ဆငျး၍ ထှကျပွေးလာစဉျ လဲကသြှားခဲ့ပါကွောငျး၊ ၎င်းငျးအပွငျယာဉျပျေါမှ အမြိုးသား ၁ ဦး(စိစဈဆဲ)မှာ မရမျးကုနျး မွို့နယျ ၃ ရပျကှကျ၊ အေးရိပျငွိမျလမျးအတှငျးသို့ ထှကျပွေးသှားပွီး အရာဝတ်တု ၁ ခုလှငျ့ပဈခဲ့၍ရှာဖှရော အေးရိပျငွိမျလမျးဘေး ရမွေောငျးအတှငျးမှ အရိုးအသှား ၉ လကျမ ခနျ့ရှိဓား ၁ ခြောငျးအား သိမျးဆညျးရမိခဲ့ပါကွောငျး၊ ဦးထှနျးထှနျးလငျး တှငျ ဝဲရငျအုံ ထိုးသှငျးဒဏျရာ ၃ ခကျြ၊ ကြောကုနျးထိုးသှငျးဒဏျရာ ၂ ခကျြ၊ ယာနံဘေး ထိုးသှငျး ဒဏျရာ ၂ ခကျြ၊ ဦးခေါငျးခြိုစောငျး ထိုးသှငျးဒဏျရာ ၁ ခကျြတို့ရရှိပွီး အငျးစိနျ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျကုသနစေဉျ သဆေုံးသှားခဲ့ပါသညျ။
၂၀၁၈ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၅ ရကျနေ့ ၀၂၀၅ အခြိနျ အမညျ(စိစဈဆဲ) အမြိုးသားအား အငျးစိနျမွို့မရဲစခနျး(ပ)၁၄၁/၂၀၁၈ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၀၂ (လူသတျမှု)ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ပွီး တရားခံဖမျးဆီးရမိရေး စုံစမျးခဲ့ရာ BB-xxxx ကိုရိုလာဗငျ အငှားယာဉျအတှငျးမှ ဂပြနျဖိနပျအဖွူရောငျ ၁ ရံ၊ ကတ်ထီပါဖိနပျနကျပွာရောငျ ၁ ရံနှငျ့ Bosch အမြိုးအစားနာရီတဈလုံးတို့တှရှေိ့၍ သဆေုံးသူ ဦးထှနျးထှနျးလငျး၏ ဇနီး ဒျေါနိုငျနိုငျလှငျ(၄၁)နှဈအား ပွသခဲ့ရာ Bosch နာရီနှငျ့ ကတ်ထီပါဖိနပျတို့မှာ ဦးထှနျးထှနျးလငျး၏ ပစ်စညျးမြားမဟုတျကွောငျး သိရှိရပွီး စဈဆေးခကျြမြားအရ ဇနျနဝါရီလ ၁၅ ရကျနေ့ နံနကျတှငျ ကိုကိုနိုငျ(ခ)ကိုနိုငျ(၃၃)နှဈသညျ ရဥေက်ကံကြေးရှာ လှိုငျသာယာမွို့နယျရှိအိမျသို့ ခန်ဓာကိုယျနှငျ့ ဘောငျးဘီတို့တှငျ ရှံမြား ပကြေံကာ ဖိနပျမပါဘဲ အငှားယာဉျဖွငျ့ပွနျလာကွောငျး၊ ယာဉျစီးခအား နအေိမျ မှတောငျးပေး ရကွောငျး၊ ၎င်းငျးသညျ Bosch အမြိုးအစားနာရီကို ဝတျဆငျလရှေိ့ပွီး အခငျးဖွဈပွီး နောကျ ၎င်းငျးနာရီအား ဝတျဆငျထားခွငျးမရှိကွောငျး သတငျးရရှိခဲ့သဖွငျ့ ဇနျနဝါရီလ ၁၈ ရကျနေ့ ၂၃၀၅ အခြိနျ ကိုကိုနိုငျ(ခ)ကိုနိုငျအား မရမျးကုနျးမွို့နယျ (၁)ရပျကှကျ ဘုရငျ့နောငျပှဲရုံ ဝနျး ယငျးမာလမျးပျေါ၌ ဖမျးဆီးရမိ၍ စဈမေးရာ ၎င်းငျးသညျ ဇနျနဝါရီလ ၁၄ ရကျနေ့ ၂၀၀၀ အခြိနျ သူငယျခငျြး မှ xxxx KTV သို့လာရနျ ဖုနျးဆကျချေါသဖွငျ့ လှိုငျသာယာမွို့နယျ Denko ဆီဆိုငျရှမှေ့ အငှားယာဉျဖွငျ့ ထှကျခှာလာစဉျ သမိုငျး လမျးဆုံမီးပှိုငျ့အရောကျတှငျ ယာဉျမောငျးမှ "ဘယျတှမေောငျး ခိုငျးနတောလဲ လိုကျမပို့ နိုငျတော့ဘူး၊ မငျးဆငျးတော့ ကားခပေးဟု တောငျးရာ ပိုကျဆံမပါကွောငျး၊ xxxx KTV ရောကျမှ သူငယျခငျြးထံမှတောငျး၍ ပေးမညျ"ဟု ပွနျပွောရာမှ အပွနျအလှနျ စကားမြား ဆဲဆိုပွီး ယာဉျနောကျခနျးအတှငျး၌ လုံးထှေးသတျပုတျစဉျ ကိုကိုနိုငျ (ခ)ကိုနိုငျမှ အသငျ့ပါလာသော ဓားဖွငျ့ ယာဉျမောငျးအား ထိုးခဲ့ပွီး ယာဉျပျေါရှိ ယာဉျမောငျး၏ Sansung ဖုနျးအားယူ၍ထှကျပွေးခဲ့ကွောငျး ထှကျဆိုသဖွငျ့ ဥပဒနှေငျ့ အညီ တရားစှဲ တငျပို့ရနျ စီစဉျထားရှိကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ဖြန့်ဝေသော မီးဘေးလုံခြုံရေးပညာပေးစာစောင်
ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာန၊ မီးသတျဦးစီးဌာနမှ ဖွနျ့ဝသေော မီးဘေးလုံခွုံရေးပညာပေးစာစောငျ
မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးရမိသည့်သတင်းများ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့)
ကသာမြို့နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိမှု
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ ၁၁၃၀ အချိန် မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၆)ကသာမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် များပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ကသာမြို့နယ်၊ လမ်းခွကျေးရွာ၊ မီးရထားသံလမ်းကူးအနီး၌ အောင်ဇော်မျိုး မောင်းနှင်လာသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရောက်ရှိလာ၍ရှာဖွေရာ အောင်ဇော်မျိုး၏ အင်္ကျီအိတ်ကပ် အတွင်းမှ ဘိန်းဖြူဆပ်ပြာခွက် တစ်ခွက် ( ဘိန်းဖြူ အလေးချိန် သုည ဒသမ ၀၁ ကီလို )၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ခွကြားရှိ ဝါးခြင်းတောင်းအတွင်းမှ ဘိန်းဖြူဆပ်ပြာခွက် ၉ ခွက် ( ဘိန်းဖြူ အလေးချိန် သုည ဒသမ ၀၉ ကီလို)၊ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၃,၈၀၀ ပြားနှင့် လက်ကိုင် ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သဖြင့် အောင်ဇော်မျိုး(၃၆)နှစ်အား မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေအရ အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြိတ်မြို့ တွင် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိမှု
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ ၁၁၀၀ အချိန် မြိတ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော ပူးပေါင်း အဖွဲ့သည် မြိတ်မြို့၊ စန္ဒဝတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေဒူးကျေးရွာထိပ်၊ မြိတ်-တနင်္သာရီ ကားလမ်းတွင် ဇင်ညို(ခ)သားကြီးအား မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့်အတူ တွေ့ရှိရှာဖွေရာ မော်တော် ဆိုင်ကယ်၏ ခေါင်းအတွင်းမှ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၁,၄၀၀ ပြား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သဖြင့် ဇင်ညို (ခ)သားကြီး (၃၃)နှစ်အား မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ အရ အရေးယူထားကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
မူးယဈဆေးဝါးဖမျးဆီးရမိသညျ့သတငျးမြား (၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၉ ရကျနေ့)
ကသာမွို့နယျတှငျ မူးယဈဆေးဝါးမြား ဖမျးဆီးရမိမှု
နပွေညျတျော၊ ဇနျနဝါရီ ၁၉
၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၈ ရကျနေ့ ၁၁၃၀ အခြိနျ မူးယဈတပျဖှဲ့စု(၆)ကသာမှ တပျဖှဲ့ဝငျ မြားပါဝငျသော ပူးပေါငျးအဖှဲ့သညျ ကသာမွို့နယျ၊ လမျးခှကြေးရှာ၊ မီးရထားသံလမျးကူးအနီး၌ အောငျဇျောမြိုး မောငျးနှငျလာသညျ့ မျောတျောဆိုငျကယျရောကျရှိလာ၍ရှာဖှရော အောငျဇျောမြိုး၏ အင်ျကြီအိတျကပျ အတှငျးမှ ဘိနျးဖွူဆပျပွာခှကျ တဈခှကျ ( ဘိနျးဖွူ အလေးခြိနျ သုည ဒသမ ၀၁ ကီလို )၊ မျောတျောဆိုငျကယျခှကွားရှိ ဝါးခွငျးတောငျးအတှငျးမှ ဘိနျးဖွူဆပျပွာခှကျ ၉ ခှကျ ( ဘိနျးဖွူ အလေးခြိနျ သုည ဒသမ ၀၉ ကီလို)၊ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ၃,၈၀၀ ပွားနှငျ့ လကျကိုငျ ဖုနျးတဈလုံးတို့ကို သိမျးဆညျးရမိခဲ့သဖွငျ့ အောငျဇျောမြိုး(၃၆)နှဈအား မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ စိတျကို ပွောငျးလဲစသေော ဆေးဝါးမြားဆိုငျရာဥပဒအေရ အရေးယူထားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
မွိတျမွို့ တှငျ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွားမြား ဖမျးဆီးရမိမှု
၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၇ ရကျနေ့ ၁၁၀၀ အခြိနျ မွိတျခရိုငျရဲတပျဖှဲ့မှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား ပါဝငျသော ပူးပေါငျး အဖှဲ့သညျ မွိတျမွို့၊ စန်ဒဝတျကြေးရှာအုပျစု၊ ရှဒေူးကြေးရှာထိပျ၊ မွိတျ-တနင်ျသာရီ ကားလမျးတှငျ ဇငျညို(ခ)သားကွီးအား မျောတျောဆိုငျကယျတဈစီးနှငျ့အတူ တှရှေိ့ရှာဖှရော မျောတျော ဆိုငျကယျ၏ ခေါငျးအတှငျးမှ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ၁,၄၀၀ ပွား သိမျးဆညျးရမိခဲ့သဖွငျ့ ဇငျညို (ခ)သားကွီး (၃၃)နှဈအား မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ စိတျကိုပွောငျးလဲစသေော ဆေးဝါးမြားဆိုငျရာ ဥပဒေ အရ အရေးယူထားကွောငျးသတငျးရရှိသညျ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ ၁၁၀၀ အချိန်တွင် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ဇေယျသိဒ္ဓိရပ်ကွက် မြို့မဈေးတွင် ပြည်သူ၁၀၀ဦးခန့်အား နေပြည်တော်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့စု(၁)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့မှ မှုခင်းအသိပညာပေးယာဉ်ဖြင့် မှုခင်းအသိပညာပေး ဟောပြောခဲ့ပြီး လက်ကမ်း စာစောင်များ ဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ ၁၇၃၀ အချိန်တွင် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ပြည်ကြီး မျက်ရှင်ရပ်ကွက်ရှိ အ.ထ.က(၅)နှင့် ကန်ကောက်ရပ်ကွက်တို့တွင် ပြည်သူ၊ ဆရာ/မ၊ ကျောင်းသား/ သူများ၊ စုစုပေါင်း ၂၁၇၃ ဦးအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့မှ မှုခင်းပြခန်းယာဉ်ဖြင့် မှုခင်းအသိပညာပေးဟောပြောခဲ့ပြီး လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေ ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ ၁၁၃၀ အချိန်တွင် မုဒုံမြို့နယ် ကမာဝက်မြို့ ရပ်ကွက်(၂) ဇယားဘုရားကျောင်းရှေ့၌ ပြည်သူ ၁၂၀ ဦးခန့်အား မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ၊ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့စု(၉)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ယာဉ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့စု(၇၇)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့စု(၃၈)မှ တပ်ဖွဲ့ ဝင်များပူးပေါင်း၍ မှုခင်းအသိပညာပေးယာဉ်ဖြင့် မှုခင်းအသိပညာပေးဟောပြောခဲ့ပြီး လက်ကမ်း စာစောင်များ ဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၈ ရကျနေ့ ၁၁၀၀ အခြိနျတှငျ ဇမ်ဗူသီရိမွို့နယျ ဇယေသြိဒ်ဓိရပျကှကျ မွို့မစြေးတှငျ ပွညျသူ၁၀၀ဦးခနျ့အား နပွေညျတျောတိုငျးရဲတပျဖှဲ့မှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ လူကုနျကူးမှု တားဆီးနှိမျနငျးရေးရဲတပျဖှဲ့ တပျဖှဲ့စု(၁)မှ တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့တို့မှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား ပါဝငျသောအဖှဲ့မှ မှုခငျးအသိပညာပေးယာဉျဖွငျ့ မှုခငျးအသိပညာပေး ဟောပွောခဲ့ပွီး လကျကမျး စာစောငျမြား ဖွနျ့ဝခေဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၈ ရကျနေ့ ၁၇၃၀ အခြိနျတှငျ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ ပွညျကွီး မကျြရှငျရပျကှကျရှိ အ.ထ.က(၅)နှငျ့ ကနျကောကျရပျကှကျတို့တှငျ ပွညျသူ၊ ဆရာ/မ၊ ကြောငျးသား/ သူမြား၊ စုစုပေါငျး ၂၁၇၃ ဦးအား မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးရဲတပျဖှဲ့မှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ လူကုနျကူးမှု တားဆီးနှိမျနငျးရေးရဲတပျဖှဲ့မှ တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့တို့မှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား ပါဝငျသော အဖှဲ့မှ မှုခငျးပွခနျးယာဉျဖွငျ့ မှုခငျးအသိပညာပေးဟောပွောခဲ့ပွီး လကျကမျးစာစောငျမြား ဖွနျ့ဝေ ခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၈ ရကျနေ့ ၁၁၃၀ အခြိနျတှငျ မုဒုံမွို့နယျ ကမာဝကျမွို့ ရပျကှကျ(၂) ဇယားဘုရားကြောငျးရှေ့၌ ပွညျသူ ၁၂၀ ဦးခနျ့အား မှနျပွညျနယျရဲတပျဖှဲ့မှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ တပျဖှဲ့ ဝငျမြား၊ လူကုနျကူးမှု တားဆီးနှိမျနငျးရေးရဲတပျဖှဲ့ တပျဖှဲ့စု(၉)မှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား ယာဉျထိနျး ရဲတပျဖှဲ့ တပျဖှဲ့စု(၇၇)မှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ မူးယဈဆေးဝါးတားဆီးနှိမျနငျးရေးရဲတပျဖှဲ့ တပျဖှဲ့စု(၃၈)မှ တပျဖှဲ့ ဝငျမြားပူးပေါငျး၍ မှုခငျးအသိပညာပေးယာဉျဖွငျ့ မှုခငျးအသိပညာပေးဟောပွောခဲ့ပွီး လကျကမျး စာစောငျမြား ဖွနျ့ဝခေဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ ၀၈၃၃ နာရီ ၂၈ စက္ကန့်အချိန်တွင် တမူးမြေ ငလျင် စခန်း၏ အရှေ့မြောက်ဘက် (၈၇)မိုင်ခန့် ကွာဝေးသော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဟုမ္မလင်းမြို့၏ မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက် (၂၉) မိုင်ခန့်အကွာ မြေပြင်အနက်(၆၈)ကီလိုမီတာခန့်အား ဗဟိုပြု၍ အင်အားရစ်ချက်စတာ စကေး(၄.၅)အဆင့်အင်အားအနည်းငယ်ရှိ မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်သွားရာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၈ ရကျနေ့ ၀၈၃၃ နာရီ ၂၈ စက်ကနျ့အခြိနျတှငျ တမူးမွေ ငလငျြ စခနျး၏ အရှမွေ့ောကျဘကျ (၈၇)မိုငျခနျ့ ကှာဝေးသော စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး ဟုမ်မလငျးမွို့၏ မွောကျ-အရှမွေ့ောကျဘကျ (၂၉) မိုငျခနျ့အကှာ မွပွေငျအနကျ(၆၈)ကီလိုမီတာခနျ့အား ဗဟိုပွု၍ အငျအားရဈခကျြစတာ စကေး(၄.၅)အဆငျ့အငျအားအနညျးငယျရှိ မွငေလငျြတဈခု လှုပျခတျသှားရာ ပကျြစီးဆုံးရှုံးမှု မရှိကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။
အမြန်လမ်း၌ သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုမောင်းနှင်သော မော်တော်ယာဉ်များနှင့် ခါးပတ်မပတ်ဘဲ မောင်းနှင်သော မော်တော်ယာဉ်များအား စစ်ဆေးအရေးယူမှု
သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုမောင်းနှင်သော မော်တော်ယာဉ်များအား စစ်ဆေးအရေးယူမှု
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၌ သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက်ကျော်လွန်မောင်းနှင်သည့် မော်တော် ယာဉ်များအား စစ်ဆေးအရေးယူလျက်ရှိရာ တိုးဂိတ်၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်တိုးဂိတ်၌ ၂၅ စီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ် အမှတ်(၃)လမ်းဆုံ တိုးဂိတ်၌ ၃၅ စီး၊ တံတားဦး မြို့နယ် စကားအင်းတိုးဂိတ်၌ ၁၄ စီး၊ ဖြူးမြို့နယ်(၁၁၅)မိုင် ဖြူးတိုးဂိတ်၌ ၄၇ စီး၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ် သီးကုန်းတိုးဂိတ်၌ ၃ စီး၊ ပဲခူးမြို့နယ် ဘောနတ်ကြီး မီနီတိုးဂိတ်၌ ၃ စီး၊ စုစုပေါင်း ၁၂၇ စီး ဖမ်းဆီး ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာယာဉ်စည်းကမ်းတရားရုံးများသို့ တရားစွဲတင်ပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်.
ခါးပတ်မပတ်ဘဲမောင်းနှင်သော မော်တော်ယာဉ်များအား စစ်ဆေးအရေးယူမှု
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၌ ခါးပတ်မပတ်ဘဲမောင်းနှင်သည့် မော်တော်ယာဉ်များအား စစ်ဆေးအရေးယူလျက်ရှိရာ တိုးဂိတ်၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော် တိုးဂိတ်၌ ခါးပတ်မပတ်သည့် ၁ စီးဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာယာဉ်စည်းကမ်း တရားရုံးသို့ တရားစွဲ တင်ပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အမွနျလမျး၌ သတျမှတျမိုငျနှုနျးထကျ ပိုမိုမောငျးနှငျသော မျောတျောယာဉျမြားနှငျ့ ခါးပတျမပတျဘဲ မောငျးနှငျသော မျောတျောယာဉျမြားအား စဈဆေးအရေးယူမှု
သတျမှတျမိုငျနှုနျးထကျ ပိုမိုမောငျးနှငျသော မျောတျောယာဉျမြားအား စဈဆေးအရေးယူမှု
ရနျကုနျ-မန်တလေးအမွနျလမျးမကွီး၌ သတျမှတျမိုငျနှုနျးထကျကြျောလှနျမောငျးနှငျသညျ့ မျောတျော ယာဉျမြားအား စဈဆေးအရေးယူလကျြရှိရာ တိုးဂိတျ၌ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၇ ရကျနတှေ့ငျ နပွေညျတျောတိုးဂိတျ၌ ၂၅ စီး၊ လှညျးကူးမွို့နယျ အမှတျ(၃)လမျးဆုံ တိုးဂိတျ၌ ၃၅ စီး၊ တံတားဦး မွို့နယျ စကားအငျးတိုးဂိတျ၌ ၁၄ စီး၊ ဖွူးမွို့နယျ(၁၁၅)မိုငျ ဖွူးတိုးဂိတျ၌ ၄၇ စီး၊ မိတ်ထီလာမွို့နယျ သီးကုနျးတိုးဂိတျ၌ ၃ စီး၊ ပဲခူးမွို့နယျ ဘောနတျကွီး မီနီတိုးဂိတျ၌ ၃ စီး၊ စုစုပေါငျး ၁၂၇ စီး ဖမျးဆီး ခဲ့ပွီး သကျဆိုငျရာယာဉျစညျးကမျးတရားရုံးမြားသို့ တရားစှဲတငျပို့သှားမညျဖွဈကွောငျး သတငျး ရရှိပါသညျ.
ခါးပတျမပတျဘဲမောငျးနှငျသော မျောတျောယာဉျမြားအား စဈဆေးအရေးယူမှု
ရနျကုနျ-မန်တလေး အမွနျလမျးမကွီး၌ ခါးပတျမပတျဘဲမောငျးနှငျသညျ့ မျောတျောယာဉျမြားအား စဈဆေးအရေးယူလကျြရှိရာ တိုးဂိတျ၌ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၇ ရကျနတှေ့ငျ နပွေညျတျော တိုးဂိတျ၌ ခါးပတျမပတျသညျ့ ၁ စီးဖမျးဆီးခဲ့ပွီး သကျဆိုငျရာယာဉျစညျးကမျး တရားရုံးသို့ တရားစှဲ တငျပို့သှားမညျဖွဈကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။
မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တွင် ငွေကျပ် သိန်း ၁,၈၀၀ ကျော် တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၈
ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ ၁၁၀၀ အချိန် မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု (၂) မြစ်ကြီးနား မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ၂၁ မိုင် ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးစခန်းတွင်တူးအောင်မောင်းနှင်ပြီး ဇော်ဘောက်အောင် လိုက်ပါလာသည့် မော်တော်ယာဉ်ရောက်ရှိလာ၍ရှာဖွေရာ မော်တော်ယာဉ် ၏ ဆီတိုင်ကီအံဝှက်အတွင်းမှ ဘိန်းဖြူဆပ်ပြာခွက် ၆၆ ခွက် (ဘိန်းဖြူ အလေးချိန် သုည ဒသမ ၆၉၃ ကီလို)၊ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၄၂,၀၀၀ ပြားနှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းနှစ်လုံးတို့ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သဖြင့် တူးအောင် (၂၂)နှစ်နှင့် ဇော်ဘောက်အောင်(၂၃)နှစ်တို့အား မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေအရ အရေးယူထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
မွဈကွီးနားမွို့နယျတှငျ ငှကေပျြ သိနျး ၁,၈၀၀ ကြျော တနျဖိုးရှိ မူးယဈဆေးဝါးမြား ဖမျးဆီးရမိ
နပွေညျတျော၊ ဇနျနဝါရီ ၁၈
ဇနျနဝါရီလ ၁၈ ရကျနေ့ ၁၁၀၀ အခြိနျ မူးယဈတပျဖှဲ့စု(၂)မွဈကွီးနားမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား ပါဝငျသော ပူးပေါငျးအဖှဲ့သညျ မွဈကွီးနားမွို့နယျ၊ ၂၁ မိုငျ ပူးပေါငျးစဈဆေးရေးစခနျးတှငျ တူးအောငျ မောငျးနှငျပွီး ဇျောဘောကျအောငျ လိုကျပါလာသညျ့ မျောတျောယာဉျရောကျရှိလာ၍ရှာဖှရော မျောတျောယာဉျ၏ဆီတိုငျကီအံဝှကျအတှငျးမှ ဘိနျးဖွူဆပျပွာခှကျ ၆၆ ခှကျ (ဘိနျးဖွူ အလေးခြိနျ သုည ဒသမ ၆၉၃ ကီလို)၊ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ၄၂,၀၀၀ ပွားနှငျ့ လကျကိုငျဖုနျးနှဈလုံးတို့ကို သိမျးဆညျးရမိခဲ့သဖွငျ့ တူးအောငျ(၂၂)နှဈနှငျ့ ဇျောဘောကျအောငျ(၂၃)နှဈတို့အား မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ စိတျကိုပွောငျးလဲစသေောဆေးဝါးမြားဆိုငျရာဥပဒအေရ အရေးယူထားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
Photos from Myanmar President Office's post
ဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၀
အမျိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ် လုပ်ငန်းရှင်များတွေ့ဆုံပွဲကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ Horizon Lake View Resort ၌ ကျင်းပသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် များ၊ ဟိုတယ်ဇုန်ဥက္ကဋ္ဌများနှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဒုတိယသမ္မတ က အမျိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေးဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည် များအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများရှိသကဲ့သို့ ပုဂ္ဂလိကအသင်းအဖွဲ့များနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ရမည့်အပိုင်းများလည်း ကျန်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါကြောင်း။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အစီအမံများ စနစ်တကျချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင် ရန်ရန်ပုံငွေရရှိရေးသည်လည်းလိုအပ်ပါကြောင်း။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေများ စနစ်တကျကောက်ခံစုစည်းရေး၊ ထိန်းသိမ်း ရေး၊ ထုတ်ယူသုံးစွဲရေးနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ အကျိုးရှိရှိ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှရရှိသည့် ဝင်ငွေများသည် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သာမက ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ အားလုံးအပေါ် အချိုးကျကျ အကျိုးအမြတ် ရရှိစေပါကြောင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် Sensitive ဖြစ်သည့်အတွက် ဝင်ငွေပုံမှန် ရရှိရန် အခြေအနေကောင်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများရှိနေရန် လိုအပ်ပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံရှိဟိုတယ်များ၏ အခန်းခဈေးနှုန်းများသည့် အခြားနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဈေးနှုန်းကြီးမြှင့်နေသည်ဟုသိရပါကြောင်း ၊ ထိုသို့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုသည် ဟိုတယ်အခန်းများနှင့် တည်းခိုသည့်ခရီးသည်အရေအတွက်အချိုးမမျှတ၍လည်း ဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါကိစ္စရပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ရေးအတွက် ဇုန်အလိုက် ဟိုတယ်များနှင့်တည်းခိုရိပ်သာများ၏ အရေအတွက်နှင့်အခန်းများတည်ရှိမှု၊ ခရီးသည်လာ ရောက်တည်းခိုမှု၊ အခန်းများပိုမိုမှု(သို့မဟုတ်) အနာဂတ်ခရီးသည် လာရောက်တည်းခိုမှု အလားအလာနှင့် ဟိုတယ်များထပ်မံဖွင့်လှစ်ပေးသင့်သည့်အစီအစဉ်များကိုဇုန်အလိုက် စိစစ်မှုများပြုလုပ်၍ တင်ပြစေလိုပါကြောင်း။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လိုအပ်သည့် Tourism Related Infrastructure များ၊ ဟိုတယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဦးစားပေးရင်းနှီး မြှုပ်နှံသွားနိုင်ကြရန်နှင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပါဝင်လာစေရေးအတွက် ပြည်ပရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများကို ပိုမိုဖိတ်ခေါ်နိုင်ရန် တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်း။
ငပလီ၊ ငွေဆောင်နှင့် ချောင်းသာဒေသများသည် ပင်လယ်ကမ်းခြေကို အမှီပြု၍ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ပင်လယ် နှင့်အနီးအဝေးကွာခြားချက်များအလိုက် ဟိုတယ်များမည်သို့ တည်ဆောက်ကြသည်ကို အခြားနိုင်ငံများဆောင်ရွက်နေသည့်နမူနာများ ကိုလေ့လာ၍ စံနှုန်းများနှင့်အကြံပြုချက်များ ကို ပြုစုပြီးဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေလိုပါ ကြောင်း။
ဟိုတယ်နှင့်တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ခရီးသည်များနှင့် ဒေသခံများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် လုံခြုံရေးသတိအစဉ်ထား၍ သက်ဆိုင်ရာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြစေလိုပါကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရများက Tourism Plan များရေးဆွဲရာတွင်လည်း ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက် ပေးစေလိုပါကြောင်းပြောကြားသည် ။
ထို့နောက် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင် က မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မိတ်ဆက်တင်ပြသည်။
ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင် က မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ သမိုင်းကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ထို့နောက် ဟိုတယ်ဇုန် ဥက္ကဋ္ဌများ က ဇုန်အလိုက်ခရီးစဉ်ဒေသများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဆိုင်ရာများနှင့် ထပ်မံတိုးချဲ့သင့်သည့် ခရီးစဉ်ဒေသများကို ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးကြည် က ဟိုတယ်များ၌ လိုအပ်သောယစ်မျိုးလိုင်စင်ကိစ္စရပ်၊ Wellness and Spa လိုင်စင်ကိစ္စရပ်၊ ခရီးသွားအခွန်ကောက်ရေးကိစ္စရပ်နှင့် ဟိုတယ်သင်တန်းများ ထိရောက်စွာဖွင့်လှစ်ပေးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင် က ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ က ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းပေးသည်။
ယင်းနောက် အမျိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ သည် တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြ သူများနှင့်အတူ စုပေါင်း၍ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
ဒုတိယသမ်မတဦးဟငျနရီဗနျထီးယူ နှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဟိုတယျလုပျငနျးရှငျမြား တှဆေုံ့
အမြိုးသားခရီးသှားလုပျငနျးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဗဟိုကျောမတီဥက်ကဋ်ဌ၊ ဒုတိယသမ်မတ ဦးဟငျနရီဗနျထီးယူနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဟိုတယျ လုပျငနျးရှငျမြားတှဆေုံ့ပှဲကို ယနနေံ့နကျ ၉ နာရီတှငျ နပွေညျတျောရှိ Horizon Lake View Resort ၌ ကငျြးပသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလာရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးအုနျးမောငျ၊ မွနျမာနိုငျငံဟိုတယျလုပျငနျးရှငျမြားအသငျးဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ အမှုဆောငျအဖှဲ့ဝငျ မြား၊ ဟိုတယျဇုနျဥက်ကဋ်ဌမြားနှငျ့တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲတှငျ ဒုတိယသမ်မတ က အမြိုးသားခရီးသှားလုပျငနျးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ ရေးဗဟိုကျောမတီဒုတိယအကွိမျ အစညျးအဝေးတှငျ ဆကျလကျဆောငျရှကျရနျရှိသညျ မြားအပျေါသကျဆိုငျရာဝနျကွီးဌာနမြား၊တိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ပွညျနယျအစိုးရမြား ဆကျလကျ ဆောငျရှကျရမညျ့လုပျငနျးမြားရှိသကဲ့သို့ ပုဂ်ဂလိကအသငျးအဖှဲ့မြားနှငျ့ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျ ရမညျ့အပိုငျးမြားလညျး ကနျြရှိသညျကိုတှရှေိ့ရပါကွောငျး။
ခရီးသှားလုပျငနျးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး အကောငျအထညျဖျောရာတှငျ အစီအမံမြား စနဈတကခြမြှတျဆောငျရှကျရနျ လိုအပျသကဲ့သို့ အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျနိုငျ ရနျရနျပုံငှရေရှိရေးသညျလညျးလိုအပျပါကွောငျး။
ခရီးသှားလုပျငနျးဖှံ့ဖွိုးရေးရနျပုံငှမြေား စနဈတကကြောကျခံစုစညျးရေး၊ ထိနျးသိမျး ရေး၊ ထုတျယူသုံးစှဲရေးနှငျ့ ကွီးကွပျကှပျကဲရေးလုပျငနျးစဉျမြားကို စနဈတကြ အကြိုးရှိရှိ စိစဈဆောငျရှကျရနျလိုအပျမညျဖွဈပါကွောငျး။
ခရီးသှားလုပျငနျးမှရရှိသညျ့ ဝငျငှမြေားသညျ နိုငျငံတျောဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ သာမက ခရီးသှားလုပျငနျးတှငျ ပါဝငျပတျသကျသူ အားလုံးအပျေါ အခြိုးကကြ အကြိုးအမွတျ ရရှိစပေါကွောငျး၊ ခရီးသှားလုပျငနျးသညျ Sensitive ဖွဈသညျ့အတှကျ ဝငျငှပေုံမှနျ ရရှိရနျ အခွအေနကေောငျးမြားနှငျ့ ပတျဝနျးကငျြကောငျးမြားရှိနရေနျ လိုအပျပါကွောငျး။
မွနျမာနိုငျငံရှိဟိုတယျမြား၏ အခနျးခဈေးနှုနျးမြားသညျ့ အခွားနိုငျငံမြားနှငျ့ နှိုငျးယှဉျလြှငျဈေးနှုနျးကွီးမွှငျ့နသေညျဟုသိရပါကွောငျး ၊ ထိုသို့ဈေးနှုနျးကွီးမွငျ့မှုသညျ ဟိုတယျအခနျးမြားနှငျ့ တညျးခိုသညျ့ခရီးသညျအရအေတှကျအခြိုးမမြှတ၍လညျး ဖွဈနိုငျပါကွောငျး၊ အဆိုပါကိစ်စရပျကိုပွနျလညျသုံးသပျနိုငျရေးအတှကျ ဇုနျအလိုကျ ဟိုတယျမြားနှငျ့တညျးခိုရိပျသာမြား၏ အရအေတှကျနှငျ့အခနျးမြားတညျရှိမှု၊ ခရီးသညျလာ ရောကျတညျးခိုမှု၊ အခနျးမြားပိုမိုမှု(သို့မဟုတျ) အနာဂတျခရီးသညျ လာရောကျတညျးခိုမှု အလားအလာနှငျ့ ဟိုတယျမြားထပျမံဖှငျ့လှဈပေးသငျ့သညျ့အစီအစဉျမြားကိုဇုနျအလိုကျ စိစဈမှုမြားပွုလုပျ၍ တငျပွစလေိုပါကွောငျး။
ခရီးသှားလုပျငနျးဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျလိုအပျသညျ့ Tourism Related Infrastructure မြား၊ ဟိုတယျမြားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ဦးစားပေးရငျးနှီး မွှုပျနှံသှားနိုငျကွရနျနှငျ့နိုငျငံခွားရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြားပါဝငျလာစရေေးအတှကျ ပွညျပရငျးနှီး မွှုပျနှံမှုမြားကို ပိုမိုဖိတျချေါနိုငျရနျ တိုကျတှနျးလိုပါကွောငျး။
ငပလီ၊ ငှဆေောငျနှငျ့ ခြောငျးသာဒသေမြားသညျ ပငျလယျကမျးခွကေိုအမှီပွု၍ ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလုပျငနျးမြားဖှံ့ဖွိုးရေးဆောငျရှကျရခွငျးဖွဈသညျ့အတှကျ ပငျလယျ နှငျ့အနီးအဝေးကှာခွားခကျြမြားအလိုကျ ဟိုတယျမြားမညျသို့ တညျဆောကျကွသညျကို အခွားနိုငျငံမြားဆောငျရှကျနသေညျ့နမူနာမြားကိုလလေ့ာ၍ စံနှုနျးမြားနှငျ့အကွံပွုခကျြမြား ကို ပွုစုပွီးဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလာရေးဝနျကွီးဌာနနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျစလေိုပါ ကွောငျး။
ဟိုတယျနှငျ့တညျးခိုရိပျသာလုပျငနျးရှငျမြားအနဖွေငျ့ ခရီးသညျမြားနှငျ့ ဒသေခံမြား ဘေးအန်တရာယျကငျးရှငျးရေးအတှကျ လုံခွုံရေးသတိအစဉျထား၍ သကျဆိုငျရာနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျကွစလေိုပါကွောငျး၊ သကျဆိုငျရာပွညျနယျနှငျ့ တိုငျးဒသေကွီး အစိုးရမြားက Tourism Plan မြားရေးဆှဲရာတှငျလညျး ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျ ပေးစလေိုပါကွောငျးပွောကွားသညျ ။
ထို့နောကျ ဟိုတယျနှငျ့ ခရီးသှားလာရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးအုနျးမောငျ က မွနျမာနိုငျငံဟိုတယျလုပျငနျးရှငျမြားနှငျ့ မိတျဆကျတငျပွသညျ။
ယငျးနောကျ မွနျမာနိုငျငံဟိုတယျလုပျငနျးရှငျမြားအသငျး ဥက်ကဋ်ဌ ဦးအောငျမြိုးမငျးဒငျ က မွနျမာနိုငျငံဟိုတယျလုပျငနျးရှငျမြားအသငျး၏ သမိုငျးကွောငျး၊ ဖှဲ့စညျးပုံနှငျ့ လုပျငနျးစဉျမြားကို ရှငျးလငျးတငျပွသညျ။
ထို့နောကျ ဟိုတယျဇုနျ ဥက်ကဋ်ဌမြား က ဇုနျအလိုကျခရီးစဉျဒသေမြားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ ရေးဆိုငျရာမြားနှငျ့ ထပျမံတိုးခြဲ့သငျ့သညျ့ ခရီးစဉျဒသေမြားကို ရှငျးလငျးတငျပွကွသညျ။
ယငျးနောကျ မွနျမာနိုငျငံဟိုတယျလုပျငနျးရှငျမြားအသငျး ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဦးအောငျမိုးကွညျ က ဟိုတယျမြား၌ လိုအပျသောယဈမြိုးလိုငျစငျကိစ်စရပျ၊ Wellness and Spa လိုငျစငျကိစ်စရပျ၊ ခရီးသှားအခှနျကောကျရေးကိစ်စရပျနှငျ့ ဟိုတယျသငျတနျးမြား ထိရောကျစှာဖှငျ့လှဈပေးရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားကို ရှငျးလငျးတငျပွသညျ။
ထို့နောကျ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးအုနျးမောငျ က ရှငျးလငျးတငျပွခကျြမြားနှငျ့ စပျလဉျြး၍ ဖွညျ့စှကျဆှေးနှေးသညျ။
ထို့နောကျ ဒုတိယသမ်မတ ဦးဟငျနရီဗနျထီးယူ က ရှငျးလငျးတငျပွခကျြမြားနှငျ့ စပျလဉျြး၍ ပေါငျးစပျ ညှိနှိုငျးပေးသညျ။
ယငျးနောကျ အမြိုးသားခရီးသှားလုပျငနျးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဗဟိုကျောမတီဥက်ကဋ်ဌ ဒုတိယသမ်မတ ဦးဟငျနရီဗနျထီးယူ သညျ တှဆေုံ့ပှဲအခမျးအနားသို့ တကျရောကျလာကွ သူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျး၍ မှတျတမျးတငျဓာတျပုံရိုကျသညျ။
(Unicode Version) ... See more
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၃ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်)
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း ... See more
ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေ (၇၁)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အမှာ စကားပြောကြား
နေပြည်တော် ဇန်န၀ါရီ ၁၉
(၇၁)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၁၈) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ (၇၁)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
အစည်းအဝေးတွင် (၇၁)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက အမှာစကားပြောကြားရာ၌ ယနေ့အစည်းအဝေး သည် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ (၇၁)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရန် ပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးဖြစ်ပါကြောင်း။
ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားကို အမျိုးသားရေး ဦးတည်ချက်(၄)ရပ်နှင့်အညီ နိုင်ငံရေးအနှစ်သာရရှိစွာဖြင့် အောင်မြင်စွာ အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ (၇၁) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဒုတိယသမ္မတ(၁) ဦးဆောင်ပြီး အဖွဲ့ဝင်(၁၃)ဦးဖြင့် လည်းကောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် နေပြည်တော်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ အဖွဲ့ဝင်(၁၇)ဦးဖြင့်လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အပြင် လက်တွေ့အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့် ဆပ်ကော်မတီ (၁၄) ခုကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ် ပါကြောင်း။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ( ၇၁ ) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့၏ အမျိုးသားရေးဦးတည်ချက် (၄)ရပ်မှာ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် ထာဝစဉ်နိုးကြားရှင်သန်ရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်မှုဖြင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို အောင်မြင်အောင် တည်ဆောက်ရေး၊ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ( ၂၁ ) ရာစုပင်လုံမှသည် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနှင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်း စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတို့ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပထမအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ၈ ချက် ချမှတ်ခဲ့ကာ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက် များကို သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့်ဆပ်ကော်မတီ(၁၄)ခုတို့က အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ပါက တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် များသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပင်လုံညီလာခံကို ကျင်းပ ခဲ့ကြပြီး တိုင်းရင်းသားအားလုံး တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကာ လွတ်လပ်ရေးကို အရယူခဲ့ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ သွေးစည်းညီညွတ်မှုကို အခိုင်အမာဖော်ကျူး ပြသနိုင်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုနေ့ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပလာသည်မှာ ယခုဆိုလျှင် (၇၁) နှစ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှုရရှိခဲ့ခြင်း ကြောင့် လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ကြောင်းကို နောင်လာနောက်သားများ သိရှိစေရန် ပြည်ထောင်စုနေ့ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိပြီး တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို အသက်တမျှ တန်ဖိုးထားရန် ရည်ရွယ်ပါကြောင်း။
ဤအခမ်းအနားသည် နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့် နိုင်ငံတော်အဆင့် အခမ်းအနား ဖြစ်သဖြင့် ချမှတ်ထားသည့် အမျိုးသားရေးဦးတည်ချက်(၄)ရပ်နှင့်အညီ ကျင်းပသွားရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ (၇၁)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားကို ယခင်နှစ်များ၏ အားနည်းချက်များအပေါ် သင်ခန်းစာယူပြီး ယခုနှစ်တွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအားလုံး ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားစေလိုပါကြောင်း။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ (၇၁)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် အခမ်းအနားကို အစီအစဉ် အပိုင်း(၂)ပိုင်းဖြင့် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပထမပိုင်းအနေဖြင့် နံနက်ပိုင်း အလံတင် အခမ်းအနားနှင့် သဝဏ်လွှာဖတ်ကြားခြင်းအခမ်းအနား၊ ညနေပိုင်းတွင် ညစာစားပွဲနှင့် ဖျော်ဖြေရေးအခမ်းအနားတို့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၂)ပိုင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြမည့် ဆပ်ကော်မတီ(၁၄)ခုအနေဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စနစ်တကျဖြင့် အကွက်စေ့အောင် ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုပါကြောင်း။
ပြည်ထောင်စုနေ့အတွက် ကျင်းပရေးဗဟို ကော်မတီမှချမှတ်ပေးမည့် အမျိုးသား ရေးဦးတည်ချက်များ၏ အနှစ်သာရကို ပြည်သူများသိရှိနားလည်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများဖြစ်သည့် ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ စာနယ်ဇင်းအားလုံးမှ ပြန်ကြား/ဖျော်ဖြေ/ ပညာပေးအစီအစဉ် အမျိုးမျိုးဖြင့် တင်ဆက် ထုတ်လွှင့်နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ရုပ်မြင်သံကြားမှ ထုတ်လွှင့်သည့်အခါ လက်ရှိကာလ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ပေါ်လွင်စေသည့် နောက်ခံရုပ်ပုံများကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ယခုနှစ် (၇၁)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားသို့ လာရောက်ကြမည့် တိုင်းဒေသကြီး(၂)ခုနှင့် ပြည်နယ်(၇)ခုတို့မှ တိုင်းရင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များ၊ တိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီးများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် ပါတီခေါင်းဆောင်များ တည်းခိုနေထိုင်မည့် နေရာများတွင် စားသောက်နေထိုင်ရေး အဆင်ပြေစေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်ထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ယခု ဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးဖြစ်သည်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီများအလိုက် ပြီးခဲ့သည့် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ အပေါ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေအသေးစိတ်နှင့် အခက်အခဲများရှိပါက ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဆွေးနွေးတင်ပြကြရန်လိုအပ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် (၇၁)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ကျင်းပရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်က ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနား၊ အလံတင်အခမ်းအနားနှင့် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲများ အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပနိုင်ရေး အတွက် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ အသေးစိတ်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ယင်းနောက် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် လုံခြုံရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ကြိုဆိုနေရာချထားရေး၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ သ၀ဏ်လွှာပြုစုရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဖိတ်ကြားရေးနှင့် နေရာချထားရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ အလံတင်အခမ်းအနား စီစဉ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မြေစိုက်ပိုစတာ များစိုက်ထူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ညစာစားပွဲ ဖျော်ဖြေရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ညစာစားပွဲခင်းကျင်းကျွေးမွေး ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်း စစ်ဆေးရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အခမ်းအနားပြင်ဆင်ရေး ဆပ်ကော်မတီနှင့် ပြန်ကြားရေး ဆပ်ကော်မတီများမှ ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ အတွင်းရေးမှူးများနှင့်တာဝန်ရှိသူများက သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများနှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် များကို ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ယင်းနောက် ဒုတိယသမ္မတက ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းပေးကာ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
အစည်းအဝေးသို့ ( ၇၁ ) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ ၀င်များဖြစ်ကြသည့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကို၊ လျှပ်စစ် နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးအုန်းမောင်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး များဖြစ်ကြသည့် ဦးကျော်မျိုးနှင့် ဦးဝင်းမော်ထွန်း၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်များ၊ တပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီတို့မှ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
ဒုတိယသမ်မတ ဦးမွငျ့ဆှေ (၇၁)နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနကေ့ငျြးပရေးဗဟိုကျောမတီ ဒုတိယအကွိမျ ညှိနှိုငျးအစညျးအဝေးသို့ တကျရောကျအမှာစကားပွောကွား
နပွေညျတျော ဇနျနဝါရီ ၁၉
(၇၁)နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနေ့ ကငျြးပရေးဗဟိုကျောမတီ ဒုတိယအကွိမျ ညှိနှိုငျးအစညျးအဝေးကို ယနနေံ့နကျ ၉ နာရီတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံတျောသမ်မတရုံး၊ ရုံးအမှတျ(၁၈) အစညျးအဝေးခနျးမ၌ ကငျြးပရာ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ (၇၁)နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနကေ့ငျြးပရေး ဗဟိုကျောမတီဥက်ကဋ်ဌ၊ ဒုတိယသမ်မတ ဦးမွငျ့ဆှေ တကျရောကျအမှာစကား ပွောကွားသညျ။
အစညျးအဝေးတှငျ (၇၁)နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနေ့ ကငျြးပရေးဗဟိုကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ၊ ဒုတိယသမ်မတ ဦးမွငျ့ဆှကေ အမှာစကားပွောကွားရာ၌ ယနအေ့စညျးအဝေး သညျ ၂၀၁၈ခုနှဈ၊ (၇၁)နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနအေ့ခမျးအနားကို အောငျမွငျစှာ ကငျြးပနိုငျရနျ ပွုလုပျသညျ့ ဒုတိယအကွိမျ ညှိနှိုငျးအစညျးအဝေးဖွဈပါကွောငျး။
ပွညျထောငျစုနအေ့ခမျးအနားကို အမြိုးသားရေး ဦးတညျခကျြ(၄)ရပျနှငျ့အညီ နိုငျငံရေးအနှဈသာရရှိစှာဖွငျ့ အောငျမွငျစှာ အကောငျ အထညျဖျောနိုငျရနျအတှကျ ၂၀၁၈ခုနှဈ၊ (၇၁) နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနကေ့ငျြးပရေး ဗဟိုကျောမတီကို ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ ဒုတိယသမ်မတ(၁) ဦးဆောငျပွီး အဖှဲ့ဝငျ(၁၃)ဦးဖွငျ့ လညျးကောငျး၊ စီမံခနျ့ခှဲမှုကျောမတီ ကို ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ နပွေညျတျောကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဆောငျ၍ အဖှဲ့ဝငျ(၁၇)ဦးဖွငျ့လညျးကောငျး ဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ့အပွငျ လကျတှအေ့ကောငျ အထညျဖျောဆောငျရှကျရမညျ့ ဆပျကျောမတီ (၁၄) ခုကိုလညျး ဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီးဖွဈ ပါကွောငျး။
၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ( ၇၁ ) နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနေ့၏ အမြိုးသားရေးဦးတညျခကျြ (၄)ရပျမှာ ပွညျထောငျစုစိတျဓာတျ ထာဝစဉျနိုးကွားရှငျသနျရေး၊ တိုငျးရငျးသား စညျးလုံး ညီညှတျမှုဖွငျ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးကို အောငျမွငျအောငျ တညျဆောကျရေး၊ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံ ( ၂၁ ) ရာစုပငျလုံမှသညျ ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျ ပွညျထောငျစုတညျဆောကျရေးနှငျ့ အသေးစားနှငျ့ အလတျစား စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားကို အားပေးမွှငျ့တငျခွငျးဖွငျ့ ပွညျထောငျစုတဈဝနျး စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစရေေးတို့ ဖွဈပါကွောငျး၊ ပထမအကွိမျညှိနှိုငျးအစညျးအဝေးကို ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ ၂၂ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပခဲ့ပွီး အစညျးအဝေးတှငျ ဆုံးဖွတျခကျြ ၈ ခကျြ ခမြှတျခဲ့ကာ အဆိုပါဆုံးဖွတျခကျြ မြားကို သကျဆိုငျရာစီမံခနျ့ခှဲမှုကျောမတီနှငျ့ဆပျကျောမတီ(၁၄)ခုတို့က အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျနသေညျကိုလညျး တှရှေိ့ရပါကွောငျး။
မွနျမာနိုငျငံ၏ လှတျလပျရေးသမိုငျးကွောငျးကိုပွနျကွညျ့ပါက တိုငျးရငျးသားခေါငျးဆောငျ မြားသညျ ၁၉၄၇ ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၂ ရကျနတှေ့ငျ ပငျလုံညီလာခံကို ကငျြးပ ခဲ့ကွပွီး တိုငျးရငျးသားအားလုံး တဈညီတဈညှတျတညျး ပငျလုံစာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့ကာ လှတျလပျရေးကို အရယူခဲ့ပါကွောငျး၊ ထိုသို့ တိုငျးရငျးသားညီအဈကိုမောငျနှမမြား၏ သှေးစညျးညီညှတျမှုကို အခိုငျအမာဖျောကြူး ပွသနိုငျခဲ့သညျ့ ပွညျထောငျစုနကေို့ နှဈစဉျကငျြးပလာသညျမှာ ယခုဆိုလြှငျ (၇၁) နှဈမွောကျရှိပွီဖွဈပါကွောငျး၊ တိုငျးရငျးသား စညျးလုံးညီညှတျမှုရရှိခဲ့ခွငျး ကွောငျ့ လှတျလပျရေးရရှိခဲ့ကွောငျးကို နောငျလာနောကျသားမြား သိရှိစရေနျ ပွညျထောငျစုနကေို့ နှဈစဉျကငျြးပလကျြရှိပွီး တိုငျးရငျးသားစညျးလုံးညီညှတျမှုကို အသကျတမြှ တနျဖိုးထားရနျ ရညျရှယျပါကွောငျး။
ဤအခမျးအနားသညျ နှဈစဉျကငျြးပသညျ့ နိုငျငံတျောအဆငျ့ အခမျးအနား ဖွဈသဖွငျ့ ခမြှတျထားသညျ့ အမြိုးသားရေးဦးတညျခကျြ(၄)ရပျနှငျ့အညီ ကငျြးပသှားရမညျ ဖွဈပါကွောငျး၊ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ (၇၁)နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနအေ့ခမျးအနားကို ယခငျနှဈမြား၏ အားနညျးခကျြမြားအပျေါ သငျခနျးစာယူပွီး ယခုနှဈတှငျ အကောငျးဆုံးဖွဈစရေေးအတှကျ သကျဆိုငျရာပွညျထောငျစုဝနျကွီးဌာနအားလုံး ပေါငျးစပျညှိနှိုငျးဆောငျရှကျသှားစလေိုပါကွောငျး။
၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ (၇၁)နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနတှေ့ငျ အခမျးအနားကို အစီအစဉျ အပိုငျး(၂)ပိုငျးဖွငျ့ ကငျြးပသှားမညျဖွဈပွီး ပထမပိုငျးအနဖွေငျ့ နံနကျပိုငျး အလံတငျ အခမျးအနားနှငျ့ သဝဏျလှာဖတျကွားခွငျးအခမျးအနား၊ ညနပေိုငျးတှငျ ညစာစားပှဲနှငျ့ ဖြျောဖွရေေးအခမျးအနား တို့ဖွဈပါကွောငျး၊ အဆိုပါ အခမျးအနားအစီအစဉျ (၂)ပိုငျးကို အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျကွမညျ့ ဆပျကျောမတီ(၁၄)ခုအနဖွေငျ့ မိမိတို့၏ လုပျငနျးတာဝနျမြားကို စနဈတကဖြွငျ့ အကှကျစအေ့ောငျ ဆောငျရှကျသှားရနျလိုပါကွောငျး။
ပွညျထောငျစုနအေ့တှကျ ကငျြးပရေးဗဟို ကျောမတီမှခမြှတျပေးမညျ့ အမြိုးသား ရေးဦးတညျခကျြမြား၏ အနှဈသာရကို ပွညျသူမြားသိရှိနားလညျနိုငျရေးအတှကျ နိုငျငံပိုငျ မီဒီယာမြားဖွဈသညျ့ ရဒေီယို၊ ရုပျမွငျသံကွား၊ စာနယျဇငျးအားလုံးမှ ပွနျကွား/ဖြျောဖွေ/ ပညာပေးအစီအစဉျ အမြိုးမြိုးဖွငျ့ တငျဆကျ ထုတျလှငျ့နိုငျရေးအတှကျ စီစဉျဆောငျရှကျရနျ လိုအပျမညျဖွဈပါကွောငျး။
ရုပျမွငျသံကွားမှ ထုတျလှငျ့သညျ့အခါ လကျရှိကာလ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့၏ တိုငျးရငျးသားစညျးလုံးညီညှတျရေးအတှကျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျနမှေုမြား၊ နိုငျငံတျော တညျငွိမျအေးခမျြးရေးအတှကျ ဆောငျရှကျနသေညျ့လုပျဆောငျခကျြမြားနှငျ့ အမြိုးသား ပွနျလညျ စညျးလုံးညီညှတျရေးအတှကျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျခကျြမြားကို ပျေါလှငျစသေညျ့ နောကျခံရုပျပုံမြားကိုလညျး ထညျ့သှငျးဖျောပွသှားရနျ လိုအပျမညျဖွဈပါကွောငျး။
ယခုနှဈ (၇၁)နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနအေ့ခမျးအနားသို့ လာရောကျကွမညျ့ တိုငျးဒသေကွီး(၂)ခုနှငျ့ ပွညျနယျ(၇)ခုတို့မှ တိုငျးရငျးသားရိုးရာယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြား၊ တိုငျးရငျးသား ရေးရာဝနျကွီးမြား၊ နိုငျငံရေးပါတီ ဥက်ကဋ်ဌမြားနှငျ့ ပါတီခေါငျးဆောငျမြား တညျးခိုနထေိုငျမညျ့ နရောမြားတှငျ စားသောကျနေ ထိုငျရေး အဆငျပွစေရေနျအတှကျ လိုအပျသညျ့ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုမြား ဆောငျရှကျထားရနျ လိုအပျမညျဖွဈပါကွောငျး။
ယခု ဒုတိယအကွိမျပွုလုပျသညျ့ အစညျးအဝေးဖွဈသညျနှငျ့အညီ သကျဆိုငျရာ ဆပျကျောမတီမြား အလိုကျ ပွီးခဲ့သညျ့ ပထမအကွိမျအစညျးအဝေးဆုံးဖွတျခကျြမြား အပျေါ ဆောငျရှကျပွီးစီးမှု အခွအေနေ အသေးစိတျနှငျ့ အခကျအခဲမြားရှိပါက ပှငျ့ပှငျ့ လငျးလငျး ဆှေးနှေးတငျပွကွရနျ လိုအပျပါကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ (၇၁)နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနကေ့ငျြးပရေး စီမံခနျ့ခှဲမှုကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ၊ နပွေညျတျောကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာမြိုးအောငျက ပွညျထောငျစုနအေ့ခမျးအနား၊ အလံတငျအခမျးအနားနှငျ့ ဂုဏျပွုညစာစားပှဲမြား အောငျအောငျမွငျမွငျ ကငျြးပနိုငျရေး အတှကျ ပထမအကွိမျ အစညျးအဝေးဆုံးဖွတျခကျြမြားအပျေါ ဆောငျရှကျပွီးစီးမှု အခွအေနေ အသေးစိတျကို ရှငျးလငျးတငျပွသညျ။
ယငျးနောကျ အစညျးအဝေးသို့ တကျရောကျလာကွသညျ့ လုံခွုံရေးဆပျကျောမတီ၊ ကွိုဆိုနရောခထြားရေး၊ ပို့ဆောငျရေးနှငျ့ ဆကျသှယျရေးဆပျကျောမတီ၊ သဝဏျလှာပွုစုရေး ဆပျကျောမတီ၊ ဘဏ်ဍာရေးဆပျကျောမတီ၊ ဖိတျကွားရေးနှငျ့ နရောခထြားရေးဆပျကျောမတီ၊ ဧညျ့ခံကြှေးမှေးရေး ဆပျကျောမတီ၊ အလံတငျအခမျးအနား စီစဉျရေးဆပျကျောမတီ၊ မွစေိုကျပိုစတာ မြားစိုကျထူရေးဆပျကျောမတီ၊ ညစာစားပှဲ ဖြျောဖွရေေးဆပျကျောမတီ၊ ကနျြးမာရေးဆပျကျောမတီ၊ ညစာစားပှဲခငျးကငျြးကြှေးမှေး ရေးဆပျကျောမတီ၊ စာရငျး စဈဆေးရေးဆပျကျောမတီ၊ အခမျးအနားပွငျဆငျရေး ဆပျကျောမတီနှငျ့ ပွနျကွားရေး ဆပျကျောမတီမြားမှ ဆပျကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌမြား၊ အတှငျးရေးမှူးမြားနှငျ့တာဝနျရှိသူမြားက သကျဆိုငျရာကဏ်ဍအလိုကျ ဆောငျရှကျထားရှိမှု အခွအေနမြေားနှငျ့ လုပျငနျးလိုအပျခကျြ မြားကို ရှငျးလငျးတငျပွကွသညျ။
ယငျးနောကျ ဒုတိယသမ်မတက ရှငျးလငျးတငျပွခကျြမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ ပေါငျးစပျ ညှိနှိုငျးပေးကာ နိဂုံးခြုပျအမှာစကားပွောကွားပွီး အစညျးအဝေးကို ရုပျသိမျးလိုကျသညျ။
အစညျးအဝေးသို့ ( ၇၁ ) နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနကေ့ငျြးပရေးဗဟိုကျောမတီ ဝငျမြားဖွဈကွသညျ့ ပွနျကွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဖမွေငျ့၊ သာသနာရေးနှငျ့ယဉျကြေးမှုဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး သူရဦးအောငျကို၊ လြှပျစဈ နှငျ့စှမျးအငျဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးဝငျးခိုငျ၊ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစား ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာမွငျ့ထှေး၊ စီမံကိနျးနှငျ့ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောဝငျး၊ ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလာရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး ဦးအုနျးမောငျ၊ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားရေးရာဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး နိုငျသကျလှငျ၊ နပွေညျတျောကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာမြိုးအောငျ၊ ဒုတိယဝနျကွီး မြားဖွဈကွသညျ့ ဦးကြျောမြိုးနှငျ ဦးဝငျးမျောထှနျး၊ နပွေညျတျောကောငျစီဝငျမြား၊ တပျမတျောမှ အရာရှိကွီးမြား၊ စီမံခနျ့ခှဲမှုကျောမတီနှငျ့ ဆပျကျောမတီတို့မှ အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျ ကွသညျ။
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၂ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်)
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး တာဝန်မှရပ်စဲခြင်း ... See more
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း ... See more
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖိုရမ်သို့ ပေးပို့သည့် သ၀ဏ်လွှာ ... See more
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ် ကျင်းပ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
နေပြည်တော် ဇန်န၀ါရီ ၁၈
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ်ကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ မင်္ဂလာသီရိဟိုတယ်၌ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။
အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ၊ ဒေါက်တာ ၀င်းမြတ်အေးနှင့် နိုင်သက်လွင်၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်လှထွန်း၊ ဒေါက်တာထွန်းနိုင်၊ ဦးအောင်ထူးနှင့် ဦးဝင်းမော်ထွန်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် များမှ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနှင့် ဒေသများမှ ဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမြဲတမ်းအတွင်း ၀န်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ရှင်များ အသင်းချုပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဝင်များ၊ NGO၊ INGO အဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံတကာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက ယနေ့ကျင်းပသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖိုရမ်သည် တိုင်းရင်းသားများ၏ အသိအမြင်နှင့်ဗဟုသုတများရရှိ ဖော်ထုတ်နိုင်စေရန် ကျင်းပခြင်းဖြစ်၍ အလွန်တန်ဖိုး ရှိသည့် ဖိုရမ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် အများအားဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ တစ်လျှောက်နှင့် တောင်ပေါ်ဒေသများတွင် အများဆုံးနေထိုင်ကြပါကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား အများစုနေထိုင်သည့် တောင်တန်းဒေသများသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးခက်ခဲပြီး တစ်နေရာနှင့်တစ်နေရာ လွယ်ကူစွာသွားလာရန် အခက်အခဲများရှိနေသေး သဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် အခြေအနေဖန်တီးခွင့် နည်းပါးပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအနေဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းအဖြေရှာရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ မည်သည့်အခက်အခဲ မည့်သည့်စိန်ခေါ်မှုမျိုးကိုမဆို တိုင်းရင်းသားအားလုံး စည်းလုံး ညီညွှတ်စွာဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဖြေရှင်းကြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် နယ်မြေဒေသ တည်ငြိမ် အေးချမ်းသာယာရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ အတွေးအမြင် မတူသည် များကို ဘေးဖယ်ထားပြီး တူညီသည်များကို စုစည်း၍ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရခြင်းများ ရှိသကဲ့သို့ မတူညီသော်လည်း ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းများလည်းရှိပါကြောင်း၊ မတူ ကွဲပြားမှုများရှိသော်လည်း စုစည်းတည်ဆောက်၍ရပါကြောင်း၊ အဓိကအရေးကြီးသည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရန်ပင်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီး ကောင်းမွန်သည့် အုပ်ချုပ်စီမံမှု၊ လမ်းညွန်မှု များနှင့်မျှမျှတတ ဆောင်ရွက်လျှင် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၏ အသီးအပွင့်များ ရရှိခံစားနေကြရသည်ကို တွေ့မြင်ကြရမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းနေပါမှ လူမှုစီးပွားဘ၀များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အသီးသီးအလိုက် ကိုယ်ပိုင်စာပေ၊ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား၊ ကိုယ်ပိုင်ဓလေ့ထုံးစံနှင့် ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုများ ရှိကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ပေါင်းစည်းဆက်သွယ်ပေးရန်နှင့် စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ ထုံးစံများနှင့် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာများ မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းထား ရှိပါကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားဒေသများ၏ လူမှုစီးပွားဘ၀များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ခိုင်မာရေး အတွက်ဆိုလျှင် စီးပွားရေးတောင့်တင်းပြီး လူမှုအသိုက်အ၀န်း တည်ငြိမ်နေရေးသည် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်ပေါ်လာ ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟူသည့် မူဝါဒများ ချမှတ်၍ တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိ ရန် (၂၁)ရာစု ပင်လုံညီလာခံ အစည်းအဝေးအဆင့်ဆင့်ကို ကျင်းပလျက်ရှိပြီး တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ လိုလားတောင့်တသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက် နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွ လက်တွဲ ၀ိုင်းဝန်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ စိန်ခေါ်မှုများကို ယုံကြည်ချက် ဖြင့် ကျော်ဖြတ်ကြရမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊
လူမှုစီးပွားဘ၀ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ဒွန်တွဲနေပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရှိမှသာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည် ဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများရှိမှလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေခံလိုအပ်ချက်သည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရေးနှင့် စွမ်းအင်လုံလောက်စွာရရှိရေးတို့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် များ အနေဖြင့်လည်း ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀င်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးမှ သာ အလျင်အမြန် အောင်မြင်ဖွံ့ဖြိုးလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေး တိုင်းရင်းသားဒေသများ၌ လူမှုစီးပွားဘ၀များ အလျင် အမြန်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေး၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်များနှင့်အညီ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် သည့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်လာရေးနှင့် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံ တော်နှင့် ကိုက်ညီသင့်လျှော်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေတစ်ရပ် ပေါ်ထွက်လာ စေရေးတို့ကို ဘက်ပေါင်းစုံနည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ကဏ္ဍ အသီးသီးရှိ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များနှင့် ပြည်သူများ ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြမည်ဆိုလျှင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အတူ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို မောင်နှမများ၏ လူမှုစီးပွားဘ၀များ အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် မွန်ပြည်နယ် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါ်စံဝင့်ခိုင် က နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပေးပို့သည့် သ၀ဏ်လွှာကို ဖတ်ကြားသည်။
ယင်းနောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်က တိုင်းရင်းသားတို့၏ လူမှုစီးပွားဘ၀များ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမှသာ ဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ရှုထောင့်များ၊ ဆန္ဒများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုများနှင့် ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား ဒေသများရှိ တောင်သူလယ်သမားများ၊ အလုပ်သမားများ၊ အမျိုးသမီး များနှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှသာ တိုင်းရင်း သားတို့၏ လူမှုစီးပွားဘ၀များ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ လူမှုစီးပွားဘ၀ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်း၍ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
ထို့နောက် ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ပါမောက္ခဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက် က တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စာတမ်းနှင့် တိုင်းရင်းသား သယံဇာတခွဲဝေအသုံးချမှု စာတမ်းကို လည်းကောင်း၊ Burma News International မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးသန်းမြင့်က ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား မီဒီယာစာတမ်းကိုလည်းကောင်း ဖတ်ကြားကြပြီး အဆိုပါ စာတမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်ရှိသူများက ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြသည်။
အဆိုပါဖိုရမ်ကို ဇန်န၀ါရီ ၁၉ ရက်ထိ ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ကြောင်း သိရ သည်။ ... See more
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
နေပြည်တော်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၇
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။
အစည်းအဝေးသို့ ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ ကော်မတီဝင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် ဒေါက်တာအောင်သူ၊ ဦးဝင်းခိုင်၊ ဦးခင်မောင်ချို၊ ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် ဦးအုန်းမောင်၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လုပ်ငန်း ကော်မတီ(၅)ရပ်မှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးများ၊ Ease of Doing Business Ranking တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူး၊ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းရှင်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယသမ္မတက ယခုကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးသည် ကော်မတီ၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့်အစည်းအဝေး များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၈)ချက်ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေ ပါကြောင်း၊ ကော်မတီအနေဖြင့် အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၈)တွင် (၃၅)ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မပြီးပြတ်သေးသည့် ကျန်(၃)ချက်ကိုလည်း အမြန်ပြီးပြတ်အောင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဦးမော့လာ မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ အားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများအနေဖြင့် အားသွန်ခွန်စိုက် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်သွားကြစေလို ပါကြောင်း။
နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍသည် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေပြီး အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေပါကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအေဂျင်စီနှင့် လုပ်ငန်းသုံးသပ်အစီရင်ခံရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ အင်တိုက် အားတိုက် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း၊ အဆိုပါကဏ္ဍများအောင်မြင်မှသာ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် လစဉ်ပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရာ( ၁၃ )ကြိမ်မြောက်အထိ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲများမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အခက်အခဲတင်ပြချက်ပေါင်း(၂၀၉)ချက် ရှိပါကြောင်း၊ အဆိုပါတင်ပြချက်များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ(၅)ရပ်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ပြန်ကြားချက်(၂၀၉)ချက်ရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ အဆိုပါအချက်များအားလုံးကိုလည်း ပြန်ကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် လွယ်ကူမှု (Ease of Doing Business) အနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် စတင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အဆင့် ၁၈၂ ဖြစ်ပြီး၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် Ease of Doing Business အစီရင်ခံစာ၌ မြန်မာနိုင်ငံသည် အဆင့် ၁၇၁ သို့ ရောက်ရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်ကြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ Ease of Doing Business အဆင့်တိုးတက်စေရန် အားလုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ Ease of Doing Business အဆင့်တိုးတက်လာစေရန်အတွက် Ease of Doing Business Ranking တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်တွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ခေါင်းဆောင်ပြီး အဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ Ease of Doing Business Indicators အလိုက် ဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (၁၀)ဖွဲ့ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားရှိပါကြောင်း၊ Ease of Doing Business အဆင့် ပိုမိုတိုးတက်မှုရရှိရေးအတွက် အညွှန်းကိန်းတစ်ခုခြင်း အလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များကလည်း အညွှန်ကိန်းတိုးတက် လာစေရန် အလေးအနက်ထား ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများအနေဖြင့်လည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ ယနေ့အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာကြသူများအနေဖြင့်လည်း ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးအတွက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးပေးကြရန် တိုက်တွန်းပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ယင်းနောက် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်က ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ကော်မတီ၏ဆောင်ရွက်ချက် များကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ထို့နောက် အခြေခံလူသားအရင်းအမြစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ငွေကြေး ရရှိစေနိုင်မှုဆိုင်ရာများ ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ၀န်းကျင်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အားပေးမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် စီးပွားရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံ၏အခန်းကဏ္ဍအား ပြန်လည်ရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတို့မှ တာဝန်ရှိသူများက သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအလိုက် ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။
ယင်းနောက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဝင်များဖြစ်ကြသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူက ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်သက်ဆိုင် သည့် လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်က ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်တွင်းသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ ၀င်ရောက်မှု၊ ဟိုတယ် လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဗီဇာရရှိနိုင်မှုအခြေအနေများကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးဦးဝင်းခိုင်က လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးအတွက် နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများနှင့် ဓာတ်အားသုံးစွဲနိုင်မှုအခြေအနေများကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုက အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်းက တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုများ တားဆီးဆောင်ရွက် နိုင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ထို့နောက် Doing Business အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ညွှန်းကိန်းနယ်ပယ်အလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့တော်များနှင့်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ များကိုယ်စား ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၊ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး ကြီးကြပ်မှုရုံးတို့မှတာဝန်ရှိသူများက သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအလိုက် ရှင်းလင်းဆွေးနွေး တင်ပြကြသည်။
ယင်းနောက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတင်ပြချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးပြီး နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကျောမတီ၏ ဆဋ်ဌမအကွိမျမွောကျ လုပျငနျးညှိနှိုငျးအစညျးသို့ တကျရောကျအမှာစကားပွောကွား
နပွေညျတျော၊ ဇနျနဝါရီ ၁၇
ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကျောမတီ၏ ဆဋ်ဌမအကွိမျမွောကျ လုပျငနျးညှိနှိုငျး အစညျးအဝေးကို ယနေ့ နံနကျ ၉ နာရီခှဲတှငျ နပွေညျတျောရှိ စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျး ရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာန အစညျးအဝေးခနျးမ၌ ကငျြးပရာ ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဒုတိယသမ်မတ ဦးမွငျ့ဆှေ တကျရောကျအမှာစကားပွောကွားသညျ။
အစညျးအဝေးသို့ ကျောမတီ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာသနျးမွငျ့၊ ကျောမတီဝငျ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးမြားဖွဈကွသညျ့ ဒေါကျတာအောငျသူ၊ ဦးဝငျးခိုငျ၊ ဦးခငျမောငျခြို၊ ဒေါကျတာမြိုးသိမျးကွီးနှငျ့ ဦးအုနျးမောငျ၊ ပွညျထောငျစုရှနေ့ခြေုပျ ဦးထှနျးထှနျးဦး၊ ဒုတိယဝနျကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံတျောဗဟိုဘဏျ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ၊ လုပျငနျး ကျောမတီ(၅)ရပျမှ ဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ အတှငျးရေးမှူးမြား၊ Ease of Doing Business Ranking တိုးတကျရေးလုပျငနျးအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ ဒုတိယဝနျကွီး ဦးအောငျထူး၊ ကျောမတီအဖှဲ့ဝငျမြား ဖွဈကွသော ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံ ကုနျသညျမြားနှငျ့ စကျမှုလကျမှုလုပျငနျးရှငျမြား အသငျးခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌ၊ မွနျမာ့ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုလုပျငနျးရှငျမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအသငျးဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ ဌာနဆိုငျရာ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
အစညျးအဝေးတှငျ ဒုတိယသမ်မတက ယခုကငျြးပသညျ့ အစညျးအဝေးသညျ ကျောမတီ၏ ဆဋ်ဌမအကွိမျမွောကျ အစညျးအဝေးဖွဈပါကွောငျး၊ ပွီးခဲ့သညျ့အစညျးအဝေး မြား၏ ဆုံးဖွတျခကျြ(၃၈)ခကျြကိုလညျး အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျလကျြရှိနေ ပါကွောငျး၊ ကျောမတီအနဖွေငျ့ အဆိုပါ ဆုံးဖွတျခကျြ(၃၈)တှငျ (၃၅)ခကျြကို ဆောငျရှကျပွီး ဖွဈပါကွောငျး၊ မပွီးပွတျသေးသညျ့ ကနျြ(၃)ခကျြကိုလညျး အမွနျပွီးပွတျအောငျ ဆကျလကျ ဆောငျရှကျလကျြရှိနပေါကွောငျး၊ ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှ နိုငျငံ၏စီးပှားရေးဦးမော့လာ မညျဖွဈပါကွောငျး၊ ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ လိုအပျခကျြမြား၊ အခကျအခဲမြား အားလုံးကို သကျဆိုငျရာဝနျကွီးဌာနမြား၊ တိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့မြားနှငျ့ လုပျငနျးကျောမတီမြားအနဖွေငျ့ အားသှနျခှနျစိုကျ ညှိနှိုငျးပေါငျးစပျဆောငျရှကျသှားကွစလေို ပါကွောငျး။
နိုငျငံတျော၏စီးပှားရေးကဏ်ဍတှငျ ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍသညျ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျး ပါဝငျနပွေီး အသေးစားနှငျ့အလတျစား စီးပှားရေးလုပျငနျးကဏ်ဍသညျ ၉၉ ရာခိုငျနှုနျးပါဝငျနပေါကွောငျး၊ ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍဖှံဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ အသေးစားနှငျ့အလတျစား စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးလုပျငနျးကျောမတီ၊ အသေးစားနှငျ့အလတျစားစီးပှားရေးလုပျငနျးမြားဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျရေးရနျပုံငှစေီမံခနျ့ခှဲမှုအဖှဲ့၊ အသေးစားနှငျ့အလတျစားစီးပှားရေး လုပျငနျးမြားဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျရေးအဂေငျြစီနှငျ့ လုပျငနျးသုံးသပျအစီရငျခံရေးအဖှဲ့မြား ဖှဲ့စညျး၍ အငျတိုကျ အားတိုကျ ဆောငျရှကျလြှကျရှိပါကွောငျး၊ အဆိုပါကဏ်ဍမြားအောငျမွငျမှသာ နိုငျငံ၏စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာမညျဖွဈပါကွောငျး။
ပုဂ်ဂလိကစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျမြားနှငျ့ လစဉျပုံမှနျတှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲမြားကို ၂၀၁၆ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလမှ စတငျ၍ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ရာ( ၁၃ )ကွိမျမွောကျအထိ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲမြားမှ စီးပှားရေး လုပျငနျးရှငျမြား၏ အခကျအခဲတငျပွခကျြပေါငျး(၂၀၉)ခကျြ ရှိပါကွောငျး၊ အဆိုပါတငျပွခကျြ မြားကိုလညျး သကျဆိုငျရာ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးဌာနမြား၊ တိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ မြားနှငျ့ လုပျငနျးကျောမတီ(၅)ရပျသို့ ပေးပို့ခဲ့ပွီး ပွနျကွားခကျြ(၂၀၉)ခကျြ ရရှိခဲ့ပါကွောငျး၊ အဆိုပါအခကျြမြားအားလုံးကိုလညျး ပွနျကွားခဲ့ပွီး ဖွဈပါကွောငျး။
စီးပှားရေးလုပျငနျးလုပျကိုငျခွငျးအတှကျ လှယျကူမှု (Ease of Doing Business) အနဖွေငျ့ ၂၀၁၄ ခုနှဈတှငျ ကမ်ဘာ့ဘဏျနှငျ့ စတငျခြိတျဆကျဆောငျရှကျခဲ့ရာ အဆငျ့ ၁၈၂ ဖွဈပွီး၂၀၁၈ ခုနှဈ ကမ်ဘာ့ဘဏျမှ ထုတျပွနျခဲ့သညျ့ Ease of Doing Business အစီရငျခံစာ၌ မွနျမာနိုငျငံသညျ အဆငျ့ ၁၇၁ သို့ ရောကျရှိနသေညျကို တှမွေ့ငျကွရမညျဖွဈပါကွောငျး၊ Ease of Doing Business အဆငျ့တိုးတကျစရေနျ အားလုံးပူးပေါငျး ဆောငျရှကျကွရမညျ ဖွဈပါကွောငျး၊ Ease of Doing Business အဆငျ့တိုးတကျလာစရေနျအတှကျ Ease of Doing Business Ranking တိုးတကျရေးလုပျငနျးအဖှဲ့ကို ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၈ ရကျတှငျ စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျး ရောငျးဝယျရေး ဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ခေါငျးဆောငျပွီး အဖှဲ့ဝငျ ၁၃ ဦးဖွငျ့ ဖှဲ့စညျး ဆောငျရှကျခဲ့ပါကွောငျး၊ Ease of Doing Business Indicators အလိုကျ ဆိုငျရာ အထောကျအကူပွုအဖှဲ့ (၁၀)ဖှဲ့ကိုလညျး ဖှဲ့စညျးဆောငျရှကျထားရှိပါကွောငျး၊ Ease of Doing Business အဆငျ့ ပိုမိုတိုးတကျမှုရရှိရေးအတှကျ အညှနျးကိနျးတဈခုခွငျး အလိုကျ တာဝနျယူ ဆောငျရှကျရမညျ့ အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျမြားကလညျး အညှနျကိနျးတိုးတကျ လာစရေနျ အလေးအနကျထား ကွိုးပမျးဆောငျရှကျကွရမညျဖွဈပါကွောငျး၊ သကျဆိုငျရာ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးဌာနမြားအနဖွေငျ့လညျး ဝိုငျးဝနျးကူညီ ဆောငျရှကျပေးစလေိုပါကွောငျး၊ ယနအေ့စညျးအဝေးသို့ တကျရောကျလာကွသူမြားအနဖွေငျ့လညျး ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍ ဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျစရေေးအတှကျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဆှေးနှေးပေးကွရနျ တိုကျတှနျးပါကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကျောမတီ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး ဒေါကျတာသနျးမွငျ့က ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဆိုငျရာမြားနှငျ့ စပျလဉျြး၍ ရှငျးလငျးတငျပွသညျ။
ယငျးနောကျ ကျောမတီအတှငျးရေးမှူး အမွဲတမျးအတှငျးဝနျ ဦးတိုးအောငျမွငျ့က ကျောမတီ၏ ဆုံးဖွတျခကျြမြားအပျေါ ဆောငျရှကျပွီးစီးမှုနှငျ့ ကျောမတီ၏ဆောငျရှကျခကျြ မြားကို ရှငျးလငျးတငျပွသညျ။
ထို့နောကျ အခွခေံလူသားအရငျးအမွဈ တညျဆောကျရေးလုပျငနျးကျောမတီ၊ ငှကွေေး ရရှိစနေိုငျမှုဆိုငျရာမြား ဆောငျရှကျရေးလုပျငနျးကျောမတီ၊ ဥပဒနှေငျ့လုပျထုံးလုပျနညျးဆိုငျရာ ဝနျးကငျြတိုးတကျကောငျးမှနျစရေေး လုပျငနျးကျောမတီ၊ ကုနျသှယျမှုနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကို အားပေးမွှငျ့တငျရေးလုပျငနျးကျောမတီနှငျ့ စီးပှားရေးနှငျ့ဝနျဆောငျမှုဆိုငျရာလုပျငနျးမြားတှငျ နိုငျငံ၏အခနျးကဏ်ဍအား ပွနျလညျရေးဆှဲရေး လုပျငနျးကျောမတီတို့မှ တာဝနျရှိသူမြားက သကျဆိုငျရာကဏ်ဍမြားအလိုကျ ဆှေးနှေးတငျပွကွသညျ။
ယငျးနောကျ ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကျောမတီဝငျမြားဖွဈကွသညျ့ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာအောငျသူက ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့သကျဆိုငျ သညျ့ လယျယာကဏ်ဍဖှံ့ဖွိုးရေးနှငျ့စပျလဉျြး၍ လညျးကောငျး၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးအုနျးမောငျက ၂၀၁၈ ခုနှဈ ပွညျတှငျးသို့ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားမြား ဝငျရောကျမှု၊ ဟိုတယျ လုပျငနျးမြားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ ဗီဇာရရှိနိုငျမှုအခွအေနမြေားကိုလညျးကောငျး၊ ပွညျထောငျစု ဝနျကွီးဦးဝငျးခိုငျက လြှပျစဈဓာတျအားရရှိရေးအတှကျ နှဈအလိုကျ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျထားရှိမှုအခွအေနမြေားနှငျ့ ဓာတျအားသုံးစှဲနိုငျမှုအခွအေနမြေားကိုလညျးကောငျး၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးခငျမောငျခြိုက အသေးစားနှငျ့အလတျစား စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ စကျမှုဝနျကွီးဌာန၏ ပါဝငျဆောငျရှကျမှုအခွအေနမြေားကို လညျးကောငျး၊ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံကုနျသညျမြားနှငျ့ စကျမှုလကျမှုလုပျငနျးရှငျမြား အသငျးခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဇျောမငျးဝငျးက တရားမဝငျကုနျသှယျမှုမြား တားဆီးဆောငျရှကျ နိုငျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားနှငျ့စပျလဉျြး၍လညျးကောငျး ရှငျးလငျးတငျပွကွသညျ။
ထို့နောကျ Doing Business အစီရငျခံစာနှငျ့ပတျသကျ၍ လကျရှိအခွအေနနှေငျ့ မြှျောမှနျးခကျြမြားကို ညှနျးကိနျးနယျပယျအလိုကျ တာဝနျယူဆောငျရှကျလကျြရှိကွသညျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ ကုမ်ပဏီမြားညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန၊ ပွညျတှငျးအခှနျမြားဦးစီးဌာန၊ နပွေညျတျော၊ ရနျကုနျ၊ မန်တလေးမွို့တျောမြားနှငျ့တိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ပွညျနယျစညျပငျသာယာရေးကျောမတီ မြားကိုယျစား ရနျကုနျမွို့တျောစညျပငျသာယာရေးကျောမတီမှ တာဝနျရှိသူတဈဦး၊ လြှပျစဈ ဓာတျအားဖွနျ့ဖွူးရေးလုပျငနျး၊ လယျယာမွစေီမံခနျ့ခှဲရေးနှငျ့ စာရငျးအငျးဦးစီးဌာန၊ မွနျမာနိုငျငံတျောဗဟိုဘဏျ၊ ကုနျသှယျရေးဦးစီးဌာနနှငျ့ ပွညျထောငျစုတရားစီရငျရေး ကွီးကွပျမှုရုံးတို့မှတာဝနျရှိသူမြားက သကျဆိုငျရာကဏ်ဍမြားအလိုကျ ရှငျးလငျးဆှေးနှေး တငျပွကွသညျ။
ယငျးနောကျ ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဒုတိယသမ်မတ ဦးမွငျ့ဆှကေ ရှငျးလငျးဆှေးနှေးတငျပွခကျြမြားနှငျ့စပျလဉျြး၍ ပေါငျးစပျညှိနှိုငျးပေးပွီး နိဂုံးခြုပျအမှာစကား ပွောကွားကာ အစညျးအဝေးကို ရုပျသိမျးခဲ့ကွောငျးသိရှိရသညျ။
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၁၅ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်)
ဒုတိယဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း ... See more
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ ချင်းတွင်းမြစ်ကူးတံတား(ခန္တီး) တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ခန္တီး ဇန်န၀ါရီ ၁၆
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် ရောက်ရှိနေသည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်၊ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ဖုန်းမြတ်၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်စိုးနှင့် ဗိုလ်ချုပ် သန်းထွဋ်တို့နှင့်အတူ ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တပ်မတော်ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် နန်းယွန်းမြို့မှ ခန္တီးမြို့သို့ ရောက်ရှိကြသည်။
ဆက်လက်၍ ဒုတိယသမ္မတနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ချင်းတွင်းမြစ်ကူးတံတား(ခန္တီး) သို့ရောက်ရှိပြီး တံတားတည်ဆောက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများကို ကြည့်ရှုရာ တံတားဦးစီး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထွန်းလင်း က တံတားဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။
အဆိုပါ ချင်းတွင်းမြစ်ကူးတံတား(ခန္တီး) သည် ခန္တီး - ဆင်သေ - လဟယ်လမ်းပေါ် တွင်တည်ရှိကာ ပင်မတံတားအရှည်မှာ ၄၄၉ ဒသမ ၅ မီတာ ၊ တံတားအကျယ်မှာ ၈ ဒသမ ၅ မီတာနှင့် ပင်မတံတား၏ ဘေးတစ်ဖက်စီတွင် လူသွားလမ်း ၁ မီတာစီပါရှိပြီး တံတား တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းနှင့် မကြာမီဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယသမ္မတနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ခန္တီးမြို့မှ တပ်မတော်အထူး လေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာလာရာ ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိကြသည်။ ... See more
တလင်တမယား စနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတည်ပြု
တရားသူကြီးနှင့် တရားရုံးဝန်ထမ်းများ ပထမဆုံး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခံရ
ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက်များအက်ဥပဒေဖြင့် စွဲချက်ထပ်တင်
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း – သတ်ပုံမှားလို့တဲ့
ကာတွန်း kzzh ● အောင်မြင်တယ်လေ …